ဆယ်ကျော်သက်များသည်ကိုကင်းဆေးစွဲခြင်း - အမူအကျင့်နှင့်ဇီဝကမ္မဗေဒဆိုင်ရာအထောက်အထားများ (၂၀၁၃) - သင်၏ ဦး နှောက်သည် Porn On the Vulnerable ဖြစ်သည်။
မြီးကောင်ပေါက်ကင်းစွဲဖို့ပို Vulnerable Are: အပြုအမူနှင့် Electrophysiological အထောက်အထား (2013)
ဝေ Chong က Wong,
Kerstin အေ Ford ကား,
JE McCutcheon ၏လက်ရှိလိပ်စာ - စိတ်ပညာဌာန၊ ချီကာဂို၊ ချီကာဂိုရှိအီလီနွိုက်တက္ကသိုလ်၊ IL 60607 ။
စာရေးသူပံ့ပိုးမှုများကို: WCW, Jem နှင့် MM သုတေသနဒီဇိုင်း; WCW, KAF, NEP နှင့် MM သုတေသနဖျော်ဖြေ; WCW, KAF, NEP, Jem နှင့် MM data တွေကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ; WCW, Jem နှင့် MM စက္ကူရေးသားခဲ့သည်။
အာရုံကြောသိပ္ပံများ၏ဂျာနယ်, 13 မတ်လ 2013, 33(11): 4913-4922; doi: 10.1523/JNEUROSCI.1371-12.2013
လူသားမြားသညျတှငျ, မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကိုကင်းစွဲဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ကြီးထွား propensity တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ သာ. ကြီးမြတ် access ကိုများနှင့်ထိတွေ့မှုကင်းရန်ဤအသက်အရွယ်မှာဒါမှမဟုတ်ဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက်ကိုကင်းများ၏စွဲလမ်းဂုဏ်သတ္တိများဖို့အထူးသဖြင့်အားနည်းချက်ရှိမရှိမှ attribute ဖြစ်ပါတယ်ရှိမရှိမသိနိုင်ပါဘူး။ ဤတွင်ကျနော်တို့ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၏ကျယ်ပြန့မှအထီးဆယ်ကျော်သက် (P42) နှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူ (~P88) ကြွက်မပြုလုပ်ရပါ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, အမူအကျင့်ကွာခြားမှု dopaminergic လှုပ်ရှားမှုအတွက်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာကွဲပြားမှုနဲ့ဆက်စပ်နေကြသည်ရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်ကျနော်တို့ဆန်းစစ်နှင့် dopamine အာရုံခံ၏လုပ်ဆောင်မှုကိုခြယ်လှယ်။ ဆယ်ကျော်သက်ကြွက်များထက်ပိုအလွယ်တကူကင်းယူလူကြီးများမှဆွေမျိုး, နိမ့်ဆေးများကိုပိုမိုထိခိုက်မခံခဲ့ကြ, (ဆိုလိုသည်မှာပို "inelastic" ခဲ့ကြသည်) ကိုကင်းစားသုံးမှု၏ သာ. ကြီးမြတ်တင်းမာမှုပြပြီး, စျေးနှုန်းတိုးမြှင့်ဖို့လျော့နည်းဖြစ်ပေါ်နိုင်ခဲ့ကြသည်။ အပြိုင်ခုနှစ်, ဆယ်ကျော်သက်ကိုလည်းတိုးချဲ့ Self-အုပ်ချုပ်ရေးအပြုအမူနှင့်ဆက်စပ်ခံရဖို့လူသိများနေတဲ့အင်္ဂါရပ် ventral tegmental ဧရိယာ dopamine အာရုံခံ၏မြင့်မားသောလှုပ်ရှားမှုပြသခဲ့သည်။ dopamine: D ၏ Pharmacological ခြယ်လှယ်2 quinpirole (agonist) သို့မဟုတ် eticlopride (ရန်) နဲ့အဲဒီ receptor function ကို, dopamine အာရုံခံဆဲလျလှုပ်ရှားမှုပြောင်းလဲပစ်ရန်, ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးအတွက်အသက်အရွယ်ကွဲပြားခြားနားမှုဖျက်သိမ်း။ ဤရွေ့ကားဒေတာကိုကင်းစွဲတာဝန်ယူမှု၏အမူအကျင့်များနှင့် electrophysiological ဆုံးအဖွတျအကြားကြောင်းကျိုးဆက်စပ်ဆက်ဆံရေးမျိုးအကြံပြုအပ်ပါသည်။ နိဂုံးချုပ်မှာတော့ဆယ်ကျော်သက်ကြီးထွားစွဲတာဝန်ယူမှု၏အမူအကျင့်များနှင့် electrophysiological စရိုက်များကိုပြ။
မြီးကောင်ပေါက်အရွယ် (လူသားကိုကင်းစွဲဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ကြီးထွား propensity တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်Kandel et al ။ , 1992; ကုန်သည်များ et al ။ , 2003; Johnston et al ။ , 2011), ကိုပိုမိုလျင်မြန်သောရောဂါတိုးတက်မှုနှင့်ပိုပြီးပြင်းထန်ရောဂါလက္ခဏာ (အားဖြင့်ထင်ရှားအဖြစ်Anthony နှင့် Petronis, 1995; Patton et al ။ , 2004; Reboussin နှင့် Anthony, 2006; ချန် et al ။ , 2009) ။ ဒါဟာ သာ. ကြီးမြတ်မူးယစ်ဆေးထိတွေ့မှုနှင့်လက်တွေ့စမ်းသပ်ချက်ကနေဒါမှမဟုတ်ဆယ်ကျော်သက်ရှိမရှိထိုကဲ့သို့သောမြင့်လွယ်ကူစွာထိခိုက်ရလဒ်များကိုကိုကင်းများ၏စွဲလမ်းဂုဏ်သတ္တိများကိုပိုမိုထိခိုက်မခံတဲ့ရှိမရှိမသိရသေးဖြစ်ပါတယ်။ တဦးတည်းအသက်အရွယ်အနှံ့မူးယစ်ဆေး-ယူပြီးအခွင့်အလမ်းများအတွက်ကွဲပြားမှုများအတွက်အကောင့်မပေးနိုငျသောကွောငျ့သောလူသားမြား၌ဤဆုံးဖြတ်ရန်ခက်ခဲသည်။ အညီအမျှပါကထိုကဲ့သို့သောမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုအပေါ်လူမှုစီးပွားရေးလွှမ်းမိုးမှုအဖြစ် nonbiological အချက်များ၏မရှိခြင်းအတွက်ကိုကင်းသုံးစွဲခြင်းလေ့လာဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူး။
တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များကိုသုံးပြီးကျနော်တို့တန်းတူမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲနိုင်၏အခြေအနေများအောက်တွင်မူးယစ်ဆေးစားသုံးမှုကိုလေ့လာနိုငျသညျ။ အဘယ်သူမျှမတစ်ခုတည်းသောအမူအကျင့်အလုပ်တခုကိုစွဲအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှဒြပ်စင်ပုံစံနိုငျသျောလညျး, ကွဲပြားခြားနားသော Self-အုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုမြင်ရ, ပြန်လည်သုံးသပ် (မူးယစ်ဆည်းပူးနေ၏တိကျသောရှုထောင့်ပုံစံနိုင်ပါတယ် Lynch နှင့်ကာရိုး, 2001) ။ လက်ရှိစာပေအရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုကြွက် (အလွဲသုံးစားမှုအချို့မူးယစ်ဆေးပိုယူ, ကွောငျးဖျောပွသSchramm-Sapyta et al ။ , 2009), ထိုကဲ့သို့သောအရက်အဖြစ် (Doremus et al ။ , 2005; Siegmund et al ။ , 2005), နီကိုတင်းနှင့်စိတ်ကြွဆေး (Levin et al ။ , 2007; Shahbazi et al ။ , 2008) ။ သို့သျောလညျးကိုကင်းအပေါ်လေ့လာမှုများကိုက်ညီမှုဖြစ်ကြပြီး, ကံမကောင်းသာ Single-ထိုးဝယ်ယူလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုအသုံးပြုကြသည်။ အချို့လေ့လာမှုများ (မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ရောက်ထက် သာ. ကြီးမြတ်စားသုံးမှုရှိသည်ကိုပြသAnker နှင့်ကာရိုး, 2010; Schramm-Sapyta et al ။ , 2011), အခြားသူများကိုဆယ်ကျော်သက်များနှင့်လူကြီးများ (ကှဲပွားမပြပါသော်လည်းLeslie et al ။ , 2004; Belluzzi et al ။ , 2005; Frantz et al ။ , 2007; Kantak et al ။ , 2007; Kerstetter နှင့် Kantak, 2007; Harvey et al ။ , 2009; လီများနှင့် Frantz, 2009) ။ ထိုအကှာဟဖြေရှင်းရန်, ဒီမှာကျွန်တော် (LgA) (Sha) ရေတိုသုံးပြီး / ရှည်လျား [မူးယစ်ဆေး-ဆည်းပူးနေ, အမည်ရ, စားသုံးမှုနှင့် sensitivity ကိုမျိုးစုံကိုရှုထောင့်ပုံစံ Self-အုပ်ချုပ်ရေးဝယ်ယူကင်းဆေးများနှင့် Self-အုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကျယ်ပြန့်ခင်းကျင်းရာတွင်အသုံးပြု (ထိုမူးယစ်ဆေးရရှိရန်အချိုးတိုးပွါးသောအခါကင်းစားသုံးမှု) access ကိုလုပျထုံးလုပျနညျး] စားသုံးမှု၏တင်းမာမှုများနှင့်ကင်းစားသုံးမှုစျေးနှုန်းတစ် function ကိုအဖြစ်။ ထိုအလုပျထုံးလုပျနညျးကိုသုံးပြီးကျနော်တို့အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်မှဆွေမျိုး, ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုကြွက်ကြီးထွားကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးအပြုအမူပြသသောတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
ကြီးထွားကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေး ventral tegmental ဧရိယာ (VTA) အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်များတွင် dopamine အာရုံခံ (၏မြင့်လှုပ်ရှားမှုနဲ့ဆက်စပ်နေပါတယ်Marinelli နှင့်အဖြူရောင်, 2000) ။ စိတ်ဝင်စားစရာ dopamine အာရုံခံများ၏လှုပ်ရှားမှုကိုလည်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကာလအတွင်းကြီးထွားနေသည် (McCutcheon နှင့် Marinelli, 2009; McCutcheon et al ။ , 2012) ။ ကျနော်တို့ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်မှုကာလအတွင်း dopamine အာရုံခံဆဲလျလှုပ်ရှားမှုပြုပြင်မွမ်းမံကြောင်းမူးယစ်ဆေးစီမံခန့်ခွဲခြင်းဖြင့်စွဲလမ်းတာဝန်ယူမှု၏အမူအကျင့်များနှင့်ဇီဝကမ္မအစီအမံများအကြားကြောင်းကျိုးဆက်စပ်တည်ထောင်ရန်ရှာ၏။ အထူးသကျနော်တို့ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုကြွက်များတွင်ကြီးထွား dopamine အာရုံခံဆဲလျလှုပ်ရှားမှုလျော့ကျလာလူကြီးများအတွက်လေ့လာတွေ့ရှိအဆင့်ဆင့်၎င်းတို့၏မွငျ့မားသောကိုကင်းစားသုံးမှုလျော့နည်းကျဆင်းလိမ့်မည်ဟုအဆိုပါယူဆချက်ကိုစမ်းသပ်; အပြန်အလှန်, လူကြီးများအတွက်တိုးပွားလာ dopamine အာရုံခံဆဲလျလှုပ်ရှားမှုမြီးကောင်ပေါက်အတွက်လေ့လာတွေ့ရှိအဆင့်ဆင့်၎င်းတို့၏ကင်းစားသုံးမှုတိုးမြှင့်မည်ဖြစ်သည်။
အထီး Sprague Dawley ကြွက်ဟာ Portage ကိုလိုနီ (ချားလ်စ်မြစ်) မှရရှိသောခဲ့ကြသည်။ သူတို့ကအတူနေတဲ့စဉ်ဆက်မပြတ် 12 ± 22 ° C ၏အပူချိန်နှင့် 2% ± 66 ၏စိုထိုင်းဆမှာ, တစ်ဦး 25 ဇအလင်း / မှောင်မိုက်သံသရာအောက်မှာလှောင်အိမ်နှုန်းသုံးခုသျောခဲ့ကြသည် ကြော်ငြာ libitum အားလုံးအချိန်များတွင်အစားအသောက်နှင့်ရေရရှိမှု။ ဆယ်ကျော်သက်ကြွက်အတိအကျ postnatal နေ့က 21 (P21) မှာနို့ခဲ့ကြသည်။ အားလုံးကြွက်စမ်းသပ်ချက်စတင်ရှေ့တော်၌ထို vivarium ~1 သီတင်းပတ်အတွင်းရောက်ရှိလာခဲ့သည်။ ဒီ acclimation အချိန်အတောအတွင်းကြွက်အနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်ကိုင်တွယ်ခဲ့သည်။ အပျိုဖော်ဝင်၏စတင်ခြင်းဟာ balano-preputial ခွဲခြာနည်းလမ်းကိုသုံးပြီး P35 မှခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် P44 ကနေဆုံးဖြတ်ထားခဲ့ပါတယ် (Kolho et al ။ , 1988); ဒါကြောင့်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် P41 မှာဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ သတ်မှတ်ထားသောနှင့် prepubertal ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုကြွက်, ( "ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုကြွက်" နောင်ခေါ်) postpubertal ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုကြွက်များနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်အသီးသီး P7, P10 နှင့် P35 မှာသောအခါ။ စတင်ခဲ့ကြသည်မဟုတ်လျှင်အားလုံးစမ်းသပ်ချက် 42-88 ဃကြာ ကြွက်တက်ကြွအခါအားလုံးလေ့လာမှုများ, အလငျး / မှောင်မိုက်သံသရာ၏မှောင်မိုက်အဆင့်စဉ်အတွင်းဖျော်ဖြေခဲ့ကြသည်။ လေ့လာရေးတစ် ~2 တစ်နှစ်ကာလအတွင်းဖျော်ဖြေခဲ့ကြသည်။
ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးသို့မဟုတ်စမ်းသပ်-ချမှတ်ကင်းတာဟာအဘို့စမ်းသပ်စစ်ဆေးကြွက် isoflurane ဓာတ်ငွေ့ (5% သော induction, 2-3% ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု) နဲ့မေ့ဆေးအောက်မှာလက်ျာပြင်ပ jugular သွေးကြော၏သွေးကြောသွင်း catheterization ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ တစ်ဦးက SILASTIC ပြွန် (10-12 သေလွန်သောသူတို့သည်အသံအတိုးအကျယ်μl) ကို jugular သွေးကြောမှလုံခြုံနှင့်လယ်ပိုင်း scapular ဒေသမှထွက်ရန်အရေပြားအောက်ဆုံးလွန်ခံခဲ့ရသည်။ ~1 ရက်သတ္တပတ်၏ postoperative ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကာလအတွင်းပြွန်ပိတ်ဆို့မှုတားဆီးဖို့မြုံဆား (100 μl) နဲ့နေ့စဉ်မှုများကိုထည့်သွင်းတွက်ချက်ခဲ့ပါတယ်။ Self-အုပ်ချုပ်ရေးအစည်းအဝေးများရဲ့ start ရှေ့တော်၌ထိုနေ့ရက်တွင်, ကြွက်များ Self-အုပ်ချုပ်ရေးအခန်းနေရာချပေးခဲ့သည် (41 × 24 စင်တီမီတာကြမ်းပြင်ဧရိယာ, 21 စင်တီမီတာမြင့်မားသော, Med Associates မှ) 1.5 ဇများအတွက်အခန်းများမှလေ့အဘို့။ ဤသည် Self-အုပ်ချုပ်ရေးအပြုအမူနှင့်အတူရောက်စွက်ဖက်ခြင်းမှရေနံဓါတ်ငွေ့ရှာဖွေရေးအပြုအမူကာကွယ်တားဆီးဖို့ပြုလေ၏။ တစ်ဦးရှေ့ပြေးစမ်းသပ်မှုတှငျကြှနျုပျတို့ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုကြွက်လူကြီးများထက်အခနျးပိုပြီးစူးစမ်းနှင့်ဤလှုပ်ရှားမှု Self-အုပ်ချုပ်ရေးအပြုအမူနှင့်အတူဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ကြောင်းကိုမှတ်ချက်ချသည်။ ဒါကြောင့်လေ့ကာလကဒီအသက်အရွယ်ဘက်လိုက်မှုဖယ်ရှားပစ်ရန်ဝတ်ပြုကြ၏။
အဆိုပါ Self-အုပ်ချုပ်ရေးအခန်းများအခနျး၏တိုတောင်းသောနှစ်ဖက်၏တစ်ဦးချင်းစီအတွက်ကြမ်းပြင်အထက်တစ်ဦးချင်းစီကတခြား, တည်ရှိသော2စင်တီမီတာဆန့်ကျင်ဘက်နှစ်ဦးကိုနှာခေါင်း-Poke တွင်းတပ်ဆင်ထားခဲ့သည်။ အခန်းအသံ-attenuating cubicle အတွင်းအပြင်တပ်ဆင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ acclimation ကာလအတွင်း, နှာခေါင်း-Poke ပေါက်တွေကိုဖုံးအုပျခဲ့သညျ။ Self-အုပ်ချုပ်မှုကာလအတွင်းတွင်းတနှာခေါင်း Poke ( "တက်ကြွသော" အပေါက်) တဦးတည်းမူးယစ်ပြုတ်ရည် [ဆိုလိုသည်မှာ fixed အချိုး 1 (FR1) ကိုအပ်, မဟုတ်ရင်ဖော်ပြထားမဟုတ်လျှင်တဦးတည်းနှာခေါင်း Poke] တဦးတည်းပြုတ်ရည်နှင့်ညီမျှ၏, ဒါကြောင့်လည်း 10 s အတွက်တက်ကြွစွာပေါက်အတွင်းပိုင်းတစ်ဦးအလင်း၏ illumination ခဲ့သည်။ တစ်ဦး 10-30 s ကိုအချိန်ကုန်ကာလမျှအချိန်ကုန်ခဲ့သည့်တိုးမြှင့်အချိုး (စျေးနှုန်း) ၏ function ကို, အဖြစ်စားသုံးမှုစမ်းသပ်ပြီးသောစမ်းသပ်မှုများတွင် မှလွဲ. အားလုံးစမ်းသပ်ချက်အတွက် overdosing ကာကွယ်တားဆီးဖို့ရှိခဲ့သည်။ အခြားအပေါက် ( "မလှုပ်မရှား") အတွက်ဥိးနှာခေါင်းမပါအကျိုးဆက်များရှိခဲ့ပါတယ်။ ပြုတ်ရည် 200 μl / kg ပမာဏမှာပြွတ်စုပ်စက် (ဆိုလိုသည်မှာ 30 တစ် 150 ဂရမ်ကြွက်များအတွက်μl) နှင့် ~12 μl / s တစ်မြန်နှုန်းဖြင့်ကယ်လွှတ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါနှာခေါင်း Poke ၏နံပါတ်နှင့်တာဟာ၏နံပါတ် Windows အတွက် Med Associates မှ Software များအထုပ်ဇယား Manager ကိုအားဖြင့်ကောက်ယူခဲ့သည်။ ပြွန်၏ Patency စမ်းသပ်မှု၏အဆုံးဆီသို့ Brevital (5 မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်, ဃ) နှင့်အတူတစ်ချိန်ကကြွက်နှုန်းကိုစမ်းသပ်ခဲ့သည်; အဆိုပါထုံဆေးတုံ့ပြန်မကြွက်များချက်ချင်းလေ့လာမှုများကနေဖယ်ရှားပစ်ခဲ့သည်။ 18 ၏ 455 (~4%) ကြွက်များ၏တစ်ဦးစုစုပေါင်းအရှင်လေ့လာမှုများမှဖယ်ထုတ်လိုက်ခဲ့ကြသည်။
စမ်းသပ်မှု 1: Self-အုပ်ချုပ်ရေးဝယ်ယူအတွက်အသက်အရွယ်ကွဲပြားခြားနားမှု
ကြွက်၏ကွဲပြားခြားနားသောအလိုက် Self-စီမံခန့်ခွဲဆားသို့မဟုတ်ကင်း (75-1200 μg / ကီလိုပြုတ်ရည်) အတွက် 1.5 ဇနေ့စဉ် 7-10 ဃဘို့ရန်ခွင့်ပြုခဲ့သည်။ (75 ပြုတ်ရည်နှုန်းμg / ကီလိုဂရမ်) ဤကင်းဆေးများအလွန်နိမ့် (ပြုတ်ရည်နှုန်း 150 μg / ကီလိုဂရမ်) အဖြစ်သတ်မှတ်ကြပါတယ်, အနိမ့်, အတန်အသင့်, (ပြုတ်ရည်နှုန်း 300 μg / ကီလိုဂရမ်) အနိမ့် (ပြုတ်ရည်နှုန်း 600 μg / ကီလိုဂရမ်) အလယ်အလတ်နှင့်မြင့်မားသော (1200 ပြုတ်ရည်နှုန်းμg / ကီလိုဂရမ်) ။ Prepubertal မြီးကောင်ပေါက်ကိုသာအတန်အသင့်အနိမ့်ထိုး (ပြုတ်ရည်နှုန်း 300 μg / ကီလိုဂရမ်) မှာစမျးသပျခဲ့သညျ။ အလယ်အလတ်ထိုး (ပြုတ်ရည်နှုန်း 600 μg / ကီလိုဂရမ်) မှာကင်းနှင့်အတူ Self-အုပ်ချုပ်ရေးအပြုအမူ၏သိမ်းယူမှုလည်းတစ်ခုဝယ်ယူစံနှုန်းထူထောင်ရန်ရည်ရွယ်ချက်ကြွက်များ၏သီးခြားဆောင်များတွင်စမ်းသပ်ခဲ့သည်။
မူးယစ်ဆေးဝါးများမှနေ့စဉ် access ကိုတာရှညျအခါမူးယစ်တာ၏ဝယ်ယူဆနျးစစျဖို့, ကြွက်များ၏သီးခြားဆောင်များတွင်6ဃများအတွက်အလယ်အလတ်ထိုး (ပြုတ်ရည်နှုန်း 600 μg / ကီလိုဂရမ်) မှာ 10 ဇနေ့စဉ်ဘို့ Self-စီမံခန့်ခွဲကင်းခွင့်ရခဲ့သည်။
စမ်းသပ်မှု 2: ကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးတင်းမာမှုအတွက်အသက်အရွယ်ကွဲပြားခြားနားမှု
ကြွက်များ၏သီးခြားဆောင်များတွင်ပထမဦးဆုံးကိုယ့်ကိုကိုယ်စီမံခန့်ခွဲ 600 ဃ (နှစ်ကြိမ်နေ့စဉ်ရှစ်4ဇအစည်းအဝေးများအဘို့) အတွက်ကိုကင်းတဲ့အလယ်အလတ်ထိုး (ပြုတ်ရည်နှုန်း 1.5 μg / ကီလိုဂရမ်) မှလေ့ကျင့်သင်ကြားခဲ့သည်။ အလယ်အလတ်မြင့်ဆေးများတင်းမာမှုတည်ထောင်ရန်လိုအပ်သည် (Ahmed ကနှင့် Koob, 1998; Mantsch et al ။ , 2004) ။ အလယ်အလတ်ဆေးများမှာစားသုံးမှုသည်ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်လူကြီးများ (အကြားကွဲပြားသောကြောင့်သဖန်းသီး။ 1) နှင့်ဒီနောက်ဆက်တွဲတင်းမာမှုကိုသြဇာလွှမ်းမိုးနိုင်, ငါတို့ကနဦးလေ့ကျင့်ရေးအဆင့်ကာလအတွင်းအသက်အရွယ်အနှံ့ကင်းစားသုံးမှုပမာဏကိုဂိုး။ သူတို့ 15-20 တာဟာရောက်ရှိခဲ့ပြီး, ဒါမှမဟုတ်3ဇအများဆုံးပြီးနောက်တစ်ချိန်ကဒီလိုလုပ်ဖို့, ကြွက် Self-အုပ်ချုပ်ရေးအခန်းများမှဖယ်ရှားခံခဲ့ရသည်။ သင်တန်းအဆင့်ပြီးနောက်ကြွက်အဆိုပါတင်းမာမှုလေ့လာမှုအကြောင်းမဲ့ခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါတင်းမာမှုလေ့လာမှုအဘို့, ကြွက်6ဃများအတွက် 1.5 ဇနေ့စဉ် (LgA) သို့မဟုတ် 12 ဇနေ့စဉ် (Sha) စမ်းသပ်ပြီးခဲ့ကြသည်။
စမ်းသပ်မှု 3: စျေးနှုန်းတစ် function ကိုအဖြစ်ကိုကင်းသုံးစွဲမှုအတွက်အသက်အရွယ်ကွဲပြားခြားနားမှု
ကြွက်များ၏သီးခြားဆောင်များတွင် (1200 μg / ကီလိုပြုတ်ရည်) အတွက် 1.5 ဇနေ့စဉ်ကင်း၏မြင့်မားထိုး-စီမံခန့်ခွဲမိမိကိုယ်ကိုခွင့်ရခဲ့သည်။ ပထမဦးဆုံး2ဃစဉ်အတွင်းကျနော်တို့အနေနဲ့ FR1 (တဦးတည်းနှာခေါင်း Poke တဦးတည်းပြုတ်ရည်နှင့်ညီမျှသည်) ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ကြွက်အသီးအသီးစျေးနှုန်းမှာနှစ်ခုအစည်းအဝေးများပြီးစီးနိုင်အောင်အဆိုပါသတ်မှတ်ထားတဲ့အချိုး (ဆိုလိုသည်မှာ, စျေးနှုန်း) ထို့နောက်သည်အခြားနေ့ရက်ကို (FR3, FR6, FR9, FR12 နှင့် FR24) တိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ analysis ကြွက်တစ်ဦးချင်းစီစျေးနှုန်းမှာပြီးစီးခဲ့သောဒုတိယ session တစ်ခုအပေါ်ဖျော်ဖြေခဲ့သည်။ Self-တာဟာ (ဆိုလိုသည်မှာစားသုံးမှု) ၏အရေအတွက်မှာ Hursh နှင့် Silberberg တည်ထောင်ခဲ့ပြီးအဆဝယ်လိုအားမျဉ်းကွေး (တပ်ဆင်အသုံးပြုရန်ခဲ့သည်2008; Hursh နှင့်ရိုးမား, 2013): မှတ်တမ်း Q = မှတ်တမ်း Q0 + k(e-α (Q0×C) - 1) ။ ဒီအကွေး (မူးယစ်ဆေးစားသုံးရန် "လှုံ့ဆျောမှု" ၏အဆင့်ကိုခန့်မှန်းရန်အသုံးပြုသည်Hursh, 1993) နှင့်ကိုကင်းစားသုံးမှုတိုးပွားလာစျေးနှုန်း (ဆိုလိုသည်မှာ "ကိုကင်းဝယ်လိုအား၏ elasticity" ဆန်သောရသောထုံးစံ) (Bickel et al ။ , 2000) ။ ထို့ကွောငျ့ (အလွဲသုံးစားမှုတာဝန်ယူမှုကိုအကဲဖြတ်ဖို့ကောင်းတစ်ဦးနည်းလမ်းကိုစဉ်းစားသည်Hursh, 1993). Q စားသုံးမှု (Self-တာဟာ၏နံပါတ်) ကိုကိုယ်စားပြုသည်နှင့် Q0 နိမ့်ဆုံးဖြစ်နိုင်သမျှစျေးနှုန်းမှာစားသုံးမှုအဆင့်ဖြစ်ပါတယ်။ C စျေးနှုန်း (ဆိုလိုသည်မှာအချိုး) ကိုကိုယ်စားပြုသည်နှင့် k (လော်ဂရစ်သမ်ယူနစ်အတွက်စားသုံးမှု၏ခန့်မှန်းခြေအကွာအဝေးများအတွက်အကောင့်တစ်ခုစဉ်ဆက်မပြတ်သတ်မှတ်k = ဤအလေ့လာမှုများအတွက် 0.91) ။ αက "မရှိမဖြစ်တန်ဖိုးကို" ဟုချေါနှင့်ကိုကင်းဝယ်လိုအား၏ elasticity ကိုကိုယ်စားပြုသည်။ အပြုအမူစားသုံးမှုစျေးနှုန်းမှအာရုံမခံစားနိုင်သောအခါ (ဆိုလိုသည်မှာစားသုံးမှုစျေးနှုန်းတိုးနေသော်လည်းထိန်းသိမ်းထားတာဖြစ်ပါတယ်) "inelastic" ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်း, သုံးစွဲမှုစျေးနှုန်း (စျေးနှုန်းတိုးနှင့်အတူဆိုလိုသည်မှာစားသုံးမှုကျဆင်းမှု) မှအထိခိုက်မခံလျှင် "elastic" ကို switch သည်။ တစ်ဦးကကမ်းပါးမတ်ကျဆင်းမှု (အသေးစိတ် elastic အပြုအမူနှင့်ကြီးမြတ်သောαညီမျှHursh နှင့် Silberberg, 2008inelastic အပြုအမူမှ) ဆွေမျိုး။ ဒီညီမျှခြင်းကိုသုံးပြီးကျနော်တို့ P ကိုတွက်ချက်နိုင်ပါတယ်max ကို, အပြုအမူ elastic မှ inelastic ဖြစ်ခြင်းကနေပြောင်းရွှေ့ရသည်ဖြစ်သောမှာစျေးနှုန်းဖြစ်သည့် (Bickel et al ။ , 2000).
စမ်းသပ်မှု 4: အသက်အရွယ်ကိုကင်းများ၏အဆင့်ဆင့်အတွက်ကွဲပြားမှုနှင့်၎င်း၏ metabolites
ကြွက်များ၏သီးခြားဆောင်များတွင်ကင်း၏ Self-စီမံခန့်ခွဲနေတဲ့အလယ်အလတ်ထိုး (600 μg / ကီလိုပြုတ်ရည်) အတွက် 1.5 ဇနေ့စဉ်2ဃဘို့ခွင့်ပြုပေးခဲ့သည်။ ဤရွေ့ကားကနဦး Self-အုပ်ချုပ်ရေးအစည်းအဝေးများနောက်ဆက်တွဲ noncontingent ကင်းတာဟာကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ဆိုခြင်းကိုမနှစ်သက်သက်ရောက်မှု minimize လုပ်ဖို့ပါဝင်သည်ခဲ့ကြသည် (1 နှင့်2ရက်ပေါင်း) (ကြိုး et al ။ , 2009) ။ ထို့နောက်ကြွက်လာမည့် 21 ဃများအတွက် 1.5 ဇနေ့စဉ်အစည်းအဝေးများကာလအတွင်းကိုကင်းများ၏5ကွန်ပျူတာ-ကိုအပ်တာဟာလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ ပြုတ်ရည်ကြွင်းသောအရာများအတွက်ပထမသုံးတာဟာအဘို့အသီးအ 1.5 မိသည်5မိ, အချိန်ကြားကာလမှာကိုအပ်။ , ဒီဒီဇိုင်း၏ရည်ရွယ်ချက်မှာအုပ်စုများကိုဖြတ်ပြီးကင်းညီမျှထိတွေ့မှုမရှိစေရန်နေစဉ် Self-အုပ်ချုပ်ရေး session တစ်ခုတူတဲ့ဖို့ဖြစ်တယ်။ စမ်းသပ်မှုနေ့ကို (နေ့က 7) တွင်, ကြွက်များသူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးကင်းပြုတ်ရည်ကိုလက်ခံရရှိပြီးနောက်2မိခေါင်းဖြတ်အသတ်ခံခဲ့ရသည်။ ပင်စည်အသှေးကိုဆိုဒီယမ်ဖလိုရိုက် (5 မီလီဂရမ်) နှင့်ပိုတက်စီယမ် oxalate (10 မီလီဂရမ်) ပါဝင်တဲ့ 8 ml ကိုပြွန်ထဲမှာစုဆောင်းခဲ့သည်; ပြွန်ထို့နောက်ကို C ° -20 မှာသိမ်းဆည်းထားခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ cerebellum ၏ထုတ်ယူမှုနှင့်ဖယ်ရှားပြီးနောက်ဦးနှောက်အခြောက်အရေခဲပေါ်မှာလတ်ဆတ်တဲ့-အေးစက်နေတဲ့တို့ -80 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှာသိမ်းဆည်းထား။ နမူနာကိုကင်းနှင့်အ metabolites (benzoylecgonine, ecgonine ethyl Ester, norcocaine) (အရည် Chromatography-တွဲဖက်အစုလိုက်အပြုံလိုက် spectrometry သုံးပြီးတိုင်းတာရာလူ့ဝိသဗေဒ, များအတွက်တက္ကသိုလ် Utah ၏ Center ကမှတင်ပို့ခဲ့သည်Lin က et al ။ , 2001, 2003).
Vivo အတွက် VTA dopamine အာရုံခံ၏ extracellular အသံဖမ်း
ကြွက်များ၏သီးခြားဆောင်များတွင် chloral ဓါတ်ကိုပြန်လည် (400 မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်, ip) နဲ့ anesthetized ခဲ့သည်။ တစ်ဦးကနှစ်ဦးနှစ်ဖက်အမြီးသွေးကြောအပိုဆောင်းထုံဆေးသို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေးသွေးကြောသွင်းအုပ်ချုပ်မှုများအတွက် cannulated ခဲ့သည်။ ကြွက်တစ်ဦး stereotaxic ယန္တရား (ဒါဝိဒ်သည် Kopf တူရိယာ) တွင်ထားရှိခဲ့ကြသည်။ ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်တစ် rectal သာမိုမီတာ (Medline စက်မှုလုပ်ငန်း) ကစောင့်ကြည့်ပြီးအပူ pad ပါ (Fintronics) နဲ့ 37 ± 0.5 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှာထိန်းသိမ်းထားခဲ့သည်။ ကျနော်တို့အဖြစ်တော့ hindpaw မှတုံ့ပြန်မှုများမရှိခြင်းသေချာနှင့်လူကြီးများအဘို့ / ဆယ်ကျော်သက်များနှင့် 60-80 အသက်ရှူဘို့မိ 52-72 အသက်ရှူ / min ၏အသက်ရှူနှုန်းသေချာနေဖြင့်မေ့ဆေး၏အတိမ်အနက်ကိုစောင့်ကြည့်။ အချို့စမ်းသပ်ချက်များတွင်အိပ်စက်ခြင်း-ပါတီအားပြည်နယ်၏အစီအမံနောက်ထပ်မေ့ဆေးတစ်တည်ငြိမ်ပြည်နယ်သေချာစေရန် cortical electroencephalograms နှင့်အတူစုဆောင်းခဲ့ကြသည်။ တစ်ဦးကဖန်ခွက်လျှပ်ကူးပစ္စည်းတစ်ခုဒေါင်လိုက်လျှပ်ကူးပစ္စည်း puller (Narishige PE-2) နဲ့, 2-မီလီမီတာ-ပြင်-အချင်းဖန် pipette ကနေဆွဲထုတ်ခြင်းနှင့် 1-2 μmတစ်ဦးအစွန်အဖျားအချင်းတစ်ဏုအောက်မှာလည်းကျိုးခဲ့သည်။ အဆိုပါလျှပ်ကူးပစ္စည်း (1% အစာရှောင်ခြင်းအစိမ်းရောင်ဆိုးဆေးနှင့်ပြည့်စုံလေ၏Thermo Fisher ကသိပ္ပံ) တစ်ဦး2မီတာ NaCl ဖြေရှင်းချက်၌တည်၏။ အဆိုပါလျှပ်ကူးပစ္စည်းများ၏ impedance 1.5 Hz (Winston အီလက်ထရောနစ် BL2.1-B က) မှာတိုင်းတာ 135-1000 MΩဖြစ်ခဲ့သည်။ တစ်ဦးက burr အပေါက်ဟာ VTA (သြဒီနိတ်များအတွက်အောက်တွင်ကြည့်ပါ) အထက်တူးခဲ့သည်။ အဆိုပါလျှပ်ကူးပစ္စည်းအသီးသီးသည်ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်လူကြီးများအတွက် cortical မျက်နှာပြင်မှ5သို့မဟုတ်6မီလီမီတာ ventral လျှော့ချ, ပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းတစ်ဟိုက်ဒရောလစ် microdrive (ဒါဝိဒ်သည် Kopf တူရိယာ) နဲ့ dopamine အာရုံခံဆဲလျအလောင်းတွေ၏ဒေသတွင်းသို့ချီတက်ခဲ့သည်။ electrodes predefined "ပုဒ်" (ဆိတ်ကွယ်ရာ 0.2 မီလီမီတာ) တစ်လျှောက်တွင်, အ VTA ဒေသတွင်း၌လျှော့ချကြသည် ဟူ. ၎င်း, အဆိုပါလူကြီးများအတွက်နမူနာဧရိယာ lambda မှ 3.2-4.0 မီလီမီတာ anterior ခဲ့ 0.2-1.4 မီလီမီတာ midline ထံမှ lateral နှင့်လူကြီးများအတွက် cortical ရဲ့မျက်နှာပြင်ကနေ 7.5-8.5 မီလီမီတာ ventral ။ အဆိုပါဆယ်ကျော်သက်အတွက်နမူနာအဆိုပါဧရိယာ lambda မှ 2.4-3.4 မီလီမီတာ anterior ခဲ့ 0.3-0.7 မီလီမီတာ midline ထံမှ lateral နှင့် cortical ရဲ့မျက်နှာပြင်ကနေ 7.5-8.5 မီလီမီတာ ventral ။ ဤရွေ့ကားကိုသြဒီနိတ်အသက်အရွယ်ကိုဖြတ်ပြီးဦးနှောက်အရွယ်အစားအတွက်ကွဲပြားမှုရှိနေသော်လည်းအလားတူဗိုလ်လုပွဲမှတ်တမ်းတင်က်ဘ်ဆိုက်များလိုက်လျောဖို့ခဲ့သည်ဆို၏ခဲ့ကြသည်။
dopamine အာရုံခံ၏ extracellular မှတ်တမ်းတင်စဉ်အတွင်းလျှပ်စစ်အချက်ပြ bandpass, 400 နှင့် 500 Hz မှာသို့မဟုတ် 50 နှင့် 800 Hz မှာ filtered တစ်ခု oscilloscope (Tektronix R5110) ရက်နေ့တွင်ပြသ, ကာဒိုးကိုခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းအားဖြင့်စောင့်ကြည့်နေတဲ့ High-impedance အသံချဲ့စက် (Fintronics) သို့ကျွေးမွေးခဲ့သည် ကာအသံအသံချဲ့စက် (မြက် AM8; မြက်တူရိယာ) ။ ဒစ်ဂျစ်တယ်ရလဒ်တစ်ခု interface ကိုမှတဆင့်တိုက်ကျွေးခဲ့ကြ (Digidata 1200 စီးရီး; Molecular ဖုန်းများအတွက်) အွန်လိုင်းလှုပ်ရှားမှုပစ်ခတ်နှင့်အနာဂတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအားလုံးကိုဒေတာသိမ်းဆည်းထားစိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားတဲ့ AxoScope software ကို (Molecular ဖုန်းများအတွက်), running ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကွန်ပျူတာရန်။ သိုလှောင်ထားသောဒေတာများဝိသေသလက္ခဏာများပစ်ခတ်ဆုံးဖြတ်သည်တဲ့ထုံးစံလုပ် program နဲ့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခဲ့ကြသည်။
Dopamine အာရုံခံ (အ VTA အတွက်ခန္ဓာဗေဒတည်နေရာအလိုက်ဖော်ထုတ်နှင့်စံဇီဝကမ္မစံနှင့်အညီခဲ့ကြBunney et al ။ , 1973) ။ အတိုချုပ်အားဖြင့်ဤသတ်မှတ်ချက်များကိုအောက်ပါအတိုင်းဖော်ပြထားသည်။ ရှည်လျားသောကြာချိန် ၂.၅ - ၃.၅.၅ ဒသမ ၅ မီလီမီတာရှည်သောဝိသေသလက္ခဏာသုံးပွင့်လွှာ (+ / - / +) လှိုင်းပုံသဏ္2.5ာန်သည်အစမှအဆုံး 3.5-400 Hz filter များသို့မဟုတ်> 500 ms အသုံးပြုခြင်းဖြင့်အစမှအနုတ်အထွတ်အထိပ်သို့ရောက်ရှိသည်။ 1.1-50 Hz filter များသုံးနိုင်သည်။ ပစ်ခတ်မှုပုံစံများသည်အလိုအလျောက်အနိမ့်ဆုံးပစ်ခတ်မှုနှုန်း 800-0.5 Hz ကိုလည်းပြသသည်။ကျေးဇူးတော်နှင့် Bunney, 1984; Marinelli et al ။ , 2006) High-အကြိမ်ရေ spikes ပြွတ်နေသောပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းပြီးတော့ Activision နေတာနှင့်အတူ (ကျေးဇူးတော်နှင့် Bunney, 1983) ။ ဤရွေ့ကားစံ dopamine အာရုံခံဖော်ထုတ်မယ်မှာ ~90% တိကျမှုရှိပါတယ် (Ungless နှင့်တော်ကကျေးဇူး, 2012) ။ dopamine အာရုံခံဆဲလ်၏သက်တမ်းကွာခြားမှုကိုဆန်းစစ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကြွက်တစ် ဦး လျှင်ဆဲလ်သုံးခုမှလေးလုံးအထိအများဆုံးစုဆောင်းခဲ့သည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုမှတ်တမ်းတင်အနည်းဆုံး3မိနစ်တည်ငြိမ်လှုပ်ရှားမှု (<5% အပြောင်းအလဲ) ၏ပါဝင်သည်။ ကျနော်တို့ပစ်ခတ်မှုနှုန်း (အချိန်ကျော် spikes) နှင့်ပစ်ခတ်မှုပုံစံကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ အဆုံးစွန်သောအဘို့, burst လှုပ်ရှားမှုပမာဏကို spikes စုစုပေါင်းအရေအတွက်ကျော်ပေါက်ကွဲမှုအတွက်ထုတ်လွှတ် spikes ၏ရာခိုင်နှုန်းအဖြစ်တွက်ချက်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကွဲကွဲပြားပြားဖြစ်ရပ်များ၏ကြိမ်နှုန်းနှင့်ပေါက်ကွဲမှုများ၏ဂုဏ်သတ္တိများ (စက္ကန့်ပေါင်းစက္ကန့်အတွင်း spikes / burst နှင့် burst ကြာချိန်) ကိုလည်းတွက်ချက်သည်။
မှတ်တမ်းတင်၏အဆုံးမှာကြွက်နက်ရှိုင်းစွာပိုဆောင်း chloral ဓါတ်ကိုပြန်လည်နှင့်အတူ anesthetized ခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါလျှပ်ကူးပစ္စည်းအစွန်အဖျားများ၏အနေအထား ~28 မိများအတွက်လျှပ်ကူးပစ္စည်းမှတဆင့်တစ်ဦး 30 μA cathode လက်ရှိဖြတ်သန်းနေဖြင့်မှတ်သားခဲ့သည်။ ဒါက discrete ဆိုးဆေးအစက်အပြောက်အပ်နှံ။ အမှတ်စဉ် Coronal အပိုင်း (10 μm) တစ်ခဲ microtome အပေါ်ဖြတ်ခဲ့ကြသည်သည်အထိဦးနှောက်ထို့နောက် (ဖယ်ရှားခံရနှင့် 40% Formalin ထဲမှာသိမ်းထားတဲ့ခဲ့ကြသည်Leica Microsystems ကို) ။ ကဏ္ဍများတပ်ဆင်ထား ဖြစ်. , လျှပ်ကူးပစ္စည်းနေရာချထားဒီလေ့လာမှုမှာသူတို့အားညီမျှသောအလေးဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်အဘို့အတွက်အိမ်သူအိမ်သား atlases သုံးပြီးအလင်း microscopy ကစိစစ်ခဲ့သည်။ အထိလေးဆဲလ်ကြွက်နှုန်းမှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါသည်နှင့်တစ်ဦးချင်းစီကြွက်များတွင်သာနောက်ဆုံးဆဲလ်ဆိုးဆေးဖြင့်မှတ်သားခဲ့သည်သကဲ့သို့၎င်း, အခြားဆဲလ်များ၏တည်နေရာများကိုနောက်ဆုံးဆဲလ်ကနေသူတို့ရဲ့မှတ်တမ်းတင်ထားသောအကွာအဝေးပေါ်အခြေခံပြီး extrapolated ခဲ့ကြသည်။ အသက်အရွယ်ကိုဖြတ်ပြီးဦးနှောက်အရွယ်အစားကွာခြားချက်ပေးထားကျနော်တို့ဆယ်ကျော်သက်တွင်ဤအကွာအဝေး extrapolate တစ်ဦးဆုံးမပဲ့ပြင်အချက်ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ဤသည်ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူဦးနှောက်ဖြတ်ပြီး midbrain ရဲ့အရှည်, အကျယ်နှင့်အမြင့်ကိုနှိုင်းယှဉ်ခြင်းအားဖြင့်တွက်ချက်ခဲ့သည်။ အဆိုပါဆုံးမခြင်းအချက်များ dorsoventral များအတွက် anteroposterior များအတွက် 1.14, mediolateral များအတွက် 1.06 နှင့် 1.09 ခဲ့ကြသည်။ ကျနော်တို့ထို့နောက်အားလုံးဆဲလ် VTA (tyrosine hydroxylase များအတွက် immunohistochemical အစွန်းအထင်း) ၏ dopaminergic ဒေသများဖေါ်ပြခြင်းတစ်ဦးအပိုဆောင်း In-အိမ်သူအိမ်သား Atlas ပေါ်သူတို့ကိုပုံဖော်အားဖြင့် VTA ၏ dopaminergic ဒေသအတွင်းဖြစ်ကြောင်းစစ်ဆေးအတည်ပြု။
ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးအပေါ် dopamine အာရုံခံဆဲလျလှုပ်ရှားမှုပြုပြင်မွမ်းမံကြောင်းမူးယစ်ဆေးဆိုးကျိုးများ
ကြွက်များ၏သီးခြားဆောင်များတွင်ကင်း၏ Self-စီမံခန့်ခွဲနေတဲ့အလယ်အလတ်ထိုး (600 μg / ကီလိုပြုတ်ရည်) အတွက် 1.5 ဇနေ့စဉ်6ဃဘို့ခွင့်ပြုပေးခဲ့သည်။ ပထမဦးဆုံး2ဃစဉ်အတွင်းကျွန်တော်တစ်ဦး FR1 (တဦးတည်းနှာခေါင်း Poke တဦးတည်းပြုတ်ရည်နှင့်ညီမျှသည်) ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ထိုအခါ FR လာမည့်3ဃများအတွက် (သုံးနှာခေါင်း Poke တဦးတည်းပြုတ်ရည်နှင့်ညီမျှကြသည်)4မှတိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ ဆယ်မိနစ်ပြီးခဲ့သည့် session တစ်ခု၏အစမှီ, ကြွက်တိုးမြှင့်ဖြစ်စေမယ့်မူးယစ်ဆေးတစ်ခုထိုးလက်ခံရရှိသို့မဟုတ် dopamine: D အပေါ်သရုပ်ဆောင်အသုံးပြုပုံ midbrain dopamine အာရုံခံဆဲလျလှုပ်ရှားမှုလျော့နည်းသွား2-class autoreceptors (ယခု မှစ. ": D ကိုခေါ်2 receptors ") ။ အထူးသကြွက်အဆိုပါ: D ပေးထားခဲ့သည်2 အဲဒီ receptor agonist quinpirole [20 μg / ကီလိုဂရမ်, SC, dopamine အာရုံခံဆဲလျလှုပ်ရှားမှုလျော့ကျတစ်ခု autoreceptor-ရွေးချယ်ထိုး (Marinelli et al ။ , 2003)], အက D2 အဲဒီ receptor ရန် eticlopride [20 μg / ကီလိုဂရမ်, SC, dopamine အာရုံခံဆဲလျလှုပ်ရှားမှုတိုးပွါးကြောင်းထိုး (Marinelli et al ။ , 2003)], သို့မဟုတ်ဆား (အရေပြားအောက်ဆုံး) တစ်ထိန်းချုပ်မှုကြောင့်ဖြစ်သည်။ မြီးကောင်ပေါက်နှင့်လူကြီးများ D ကိုအလားတူ sensitivity ကိုပြသသောအားပေး2 receptors (McCutcheon et al ။ , 2012), ဤအ pharmacological ထိန်းသိမ်းရေးအသက်အရွယ်ကိုဖြတ်ပြီးနှုန်းကိုပစ်ခတ် dopamine အာရုံခံဆဲလျအပေါ်အလားတူသက်ရောက်မှုဖြစ်ပေါ်သင့်ပါတယ်။
ကိုကင်း HCl မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုအပေါ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အင်စတီကျုအားဖြင့်ရက်ရက်ရောရောပေးအပ်သို့မဟုတ် Sigma-Aldrich ထံမှဝယ်ယူကာ 0.9% ဆားဖြေရှင်းချက်အတွက်ဖျက်သိမ်းခံခဲ့ရသည်; ဖြေရှင်းချက်၏ pH ကို 6.5N NaOH နှင့်အတူ 7.0-0.1 မှာသိုထားခဲ့ပါတယ်။ Brevital, quinpirole Hydrochloride နှင့် eticlopride Hydrochloride ဟင်နရီ Schein ထံမှဝယ်ယူခြင်းနှင့် 0.9% ဆားဖြေရှင်းချက်အတွက်ဖျက်သိမ်းခံခဲ့ရသည်။ Isoflurane နှင့် 0.9% ဆားဖြေရှင်းချက်ဘတ္ Schein ထံမှဝယ်ယူခဲ့သည်။ Chloral ဓါတ်ကိုပြန်လည် Sigma-Aldrich ထံမှဝယ်ယူခြင်းနှင့် deionized ရေအတွက်ဖျက်သိမ်းခံခဲ့ရသည်။
လာသောအခါအသက်အရွယ်များ၏အကြား-ဘာသာရပ်အချက်များ, ထိုး (ကိုကင်း vs ဆား) နှင့်လက်လှမ်းမီအခြေအနေ (အရွယ်ရောက်သူသို့မဟုတ် prepubertal မြီးကောင်ပေါက်, ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်လူကြီးများ vs မြီးကောင်ပေါက်) (LgA vs Sha), သင့်လျော်သောနှာခေါင်း Poke နဲ့တာဟာ, အသုံးပြု. ANOVA နှင့်အတူဆန်းစစ်ခဲ့ကြသည်, အပေါက် (မလှုပ်မရှား vs တက်ကြွ), သင်တန်း၏ရက်ပေါင်း (ထိုစမ်းသပ်မှုအရသိရသည်ကွဲပြားခြားနားသော Duration), fixed အချိုး (FR1, FR3, FR6, FR9, FR12 နှင့် FR24), နှင့်အချိန်အချက်နှင့်အတွင်း-ဘာသာရပ်အချက်များ (pretreatment vs. posttreatment) ။ Newman က-Keuls စမ်းသပ်မှုအတွက်အသုံးပြုခဲ့သည် post ကို hoc ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း။ ဝယ်ယူမှုသို့ရောက်သည့်ကြွက်များ၏အချိုးအစားကို Fisher ၏တိကျသောစစ်ဆေးမှုဖြင့်အကဲဖြတ်ခဲ့သည်။ dopamine အာရုံခံဆဲလ်၏လုပ်ဆောင်မှုကိုကျောင်းသား၏လေ့လာမှုနှင့်အတူလေ့လာခဲ့သည် t စစ်ဆေးမှု (အရွယ်ရောက်ပြီးသူ vs မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်) ။ သွေးနှင့် ဦး နှောက်အဆင့်ကိုကိုကင်းနှင့်၎င်း၏ metabolites များကိုလည်းကျောင်းသား၏နှင့်အတူခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခဲ့ကြသည် t နမူနာများရှာဖွေတွေ့ရှိတံခါးခုံကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောခဲ့ကြသည်မဟုတ်လျှင်စမ်းသပ်မှု (မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နှင့်လူကြီးများ); ဒီကိစ္စမှာမန်းဝှစ်တနီကိုသုံးခဲ့တယ် U စမ်းသပ်မှု (အရွယ်ရောက်သူ vs မြီးကောင်ပေါက်) ။ အထက်ပါဒေတာများကို Statistica (StatSoft) နဲ့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခဲ့ကြသည်။ ဝယ်လိုအား၏ elasticity Prism ကို6(GraphPad Software များ) နှင့်အတူဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါအဆဝယ်လိုအားမျဉ်းကွေးတန်ဖိုးများအတွက်ကွာခြားချက်များ Q0 နှင့်αတစ်ခုသုံးပြီးဆန်းစစ်ခဲ့ကြသည် F စမ်းသပ်မှု (Cassidy နဲ့ Dallery, 2012) ။ အရေးပါမှုအဆင့်အားလုံးစမ်းသပ်မှုများအတွက် 0.05 ဖြစ်ခဲ့သည်။
စမ်းသပ်မှု 1: Self-အုပ်ချုပ်ရေး၏ဝယ်ယူအတွက်အသက်အရွယ်ကွဲပြားခြားနားမှု
ကျနော်တို့ဆားနှင့်ကိုကင်းများ၏ငါးကြိမ်များအတွက် Self-အုပ်ချုပ်ရေးအပြုအမူနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ။ အားလုံးဆေးများအဘို့, ကိုကင်းစားသုံးမှုပုံမှန်အားကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေး (Data ပြမပါ) ၏2ဃပြီးနောက်တည်ငြိမ်; ထို့ကွောငျ့, ဝယ်ယူ profile များကိုများတွင်ပြသ ပုံ 1A သာ မှစ. တစ်နေ့လျှင်3ကနေဒေတာတွေကိုပါဝင်သည်။
ကိုကင်းဆေးများကိုဖြတ်ပြီးကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးအပြုအမူ၏သိမ်းယူမှု။ Aတစ်ဦးကအလွန်နိမ့် (ပြုတ်ရည်နှုန်း 75 μg / ကီလိုဂရမ်) မှာဆားသို့မဟုတ်ကင်း၏စားသုံးမှု, အနိမ့် (ပြုတ်ရည်နှုန်း 150 μg / ကီလိုဂရမ်), အတန်အသင့်အနိမ့် (ပြုတ်ရည်နှုန်း 300 μg / ကီလိုဂရမ်), အလယ်အလတ် (ပြုတ်ရည်နှုန်း 600 μg / ကီလိုဂရမ်), သို့မဟုတ် (1200 ပြုတ်ရည်နှုန်းμg / ကီလိုဂရမ်) မွငျ့မားနေ့စဉ် Sha (1.5 ဇ) ကာလအတွင်းထိုး။ တစ်ခုချင်းစီကိုအမှတ် 1.5 ဇ Self-အုပ်ချုပ်ရေးအစည်းအဝေးများ၏တစ်ဦးချင်းစီအတွက်တစ်ဦးချင်းစီအဖွဲ့ SEM ±ယုတ်ကိုကိုယ်စားပြုတယ်။ မြီးကောင်ပေါက် (n = 6, 8, 8, 16, 20 နှင့် 12) နှင့်အရွယ်ရောက်သူ (n အသီးသီးပြုတ်ရည်နှုန်းဆေးများ 6, 8, 9, 11, 18 နှင့် 13 μg / ကီလိုဂရမ်မှာ = 0, 75, 150, 300, 600 နှင့် 1200), n = ပြုတ်ရည်နှုန်း 14 μg / kg ဆေးထိုးမှာ prepubertal မြီးကောင်ပေါက်အဘို့အ 300 ။ B, လူကြီးများမှဆွေမျိုးမြီးကောင်ပေါက်ထဲမှာကိုကင်းများ၏အမျိုးမျိုးသောဆေးများမှာကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးသိမ်းယူမှု။ တစ်ခုချင်းစီကိုအမှတ်မှာပြထားတဲ့ဆေးများမှာနောက်ဆုံး3Self-အုပ်ချုပ်ရေးကာလ၏± SEM ဆိုလိုကိုယ်စားပြုတယ် A.
As ပုံ 1A ဆား၏ရှိုးများ, ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်လူကြီးများကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရအလားတူပမာဏ (အသက်အကျိုးသက်ရောက်မှု, F(1,10) = 0.01, NS), အလွန်နိမ့်ထိုး (ပြုတ်ရည်နှုန်း 75 μg / ကီလိုဂရမ်, အသက်အကျိုးသက်ရောက်မှုမှာကိုကင်း, F(1,14) = 0.03, NS), နှင့်မြင့်မားသောထိုး (ပြုတ်ရည်နှုန်း 1200 μg / ကီလိုဂရမ်, အသက်အကျိုးသက်ရောက်မှုမှာကိုကင်း, F(1,23) = 0.22, NS) ။ မြီးကောင်ပေါက်မယ့်အနိမ့်ထိုး (ပြုတ်ရည်နှုန်း 150 μg / ကီလိုဂရမ်, အသက်အကျိုးသက်ရောက်မှုမှာလူကြီးများထက်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရကိုပိုပြီးကင်း, F(1,15) = 11.27, p <0.01), အတန်အသင့်အနိမ့်ဆေးထိုး (ပြုတ်ရည်နှုန်း 300 μg / kg, အသက်အကျိုးသက်ရောက်မှု, F(2,38) = 9.85, p <0.001) နှင့်အလယ်အလတ်ထိုး (ပြုတ်ရည်နှုန်း 600 μg / kg, အသက်အကျိုးသက်ရောက်မှု, F(1,36) = 19.83, p <0.001) ။ Prepubertal ကြွက်များကိုအလယ်အလတ်အနိမ့်ဆုံးဆေးထိုး (ပြုတ်ရည်တစ်ခုလျှင် ၃၀၀ μg / kg) ဖြင့်စမ်းသပ်ခဲ့သည်။ စားသုံးမှုအသက်အရွယ် (အသက်အကျိုးသက်ရောက်မှု,) အရသိရသည်ကွဲပြား F(2,38) = 2.85, p <0.001) ။ အထူးသဖြင့် prepubertal မြီးကောင်ပေါက်များနှင့်လူကြီးများသည်အလားတူကိုကင်း (ns) စားသုံးမှုကိုပြသခဲ့သည်။ မြီးကောင်ပေါက်များသည် prepubertal ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်လူကြီးများထက်ပိုမိုစားသုံးမှုကိုပြသခဲ့သည် (p <0.001) ။ ပုံ 1B တစ်ခုချင်းစီကိုထိုးမှာ Self-အုပ်ချုပ်ရေး၏နောက်ဆုံး3ဃကျော်စီထိုးဘို့ပျမ်းမျှအားစားသုံးမှုပြသထားတယ်။ ကွဲပြားခြားနားသောဆေးများလပေါင်းများစွာဖြတ်ပြီးသီးခြားစမ်းသပ်မှုတွေအတွက်စမ်းသပ်ပြီးကြောင့်တိုက်ရိုက်အုပ်စုကိုနှိုင်းယှဉ်လုပ်မခံခဲ့ရပါ။ ဒါကြောင့်မကြာခဏကအရမ်းနိမ့်ဆေးများအဘို့အဖြစ်ပျက်အဖြစ်အုပ်စုတစုပျမ်းမျှမူးယစ်ဆေးဝါးစားသုံးမှု၏အလွန်မြင့်မားသောပမာဏပြတယောက်ဆယ်ကျော်သက်ရွယ်ကြွက်နှင့်တစ်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်အားဖြင့် skewed ကြောင့်နိမ့်ဆုံးထိုး (75 μg / ကီလိုဂရမ်) မပါဝင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါကိန်းဂဏန်း (ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်မှုများအတွက်ဂန္ထဝင် inverted ဦး-shaped ထိုး-တုံ့ပြန်မှုကွေးသရုပ်ဖော်Lynch နှင့်ကာရိုး, 2001) နှစ်ဦးစလုံးအသက်အုပ်စုများဖြစ်သည်။
ကျနော်တို့လာမယ့်မြီးကောင်ပေါက်ကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်ကဝယ်ယူရောက်ရှိဖို့ ယူ. ကာလ၏အရေအတွက်ဝယ်ယူရောက်ရှိကြောင်းကြွက်များ၏အချိုးအစားကိုဆန်းစစ်နေဖြင့်ပိုပြီးလျှင်မြန်စွာလူကြီးများထက် Self-အုပ်ချုပ်ရေးဆည်းပူးခြင်းရှိမရှိဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ တို့ကအဆိုပြုထားအတိုင်းဤစမ်းသပ်မှုဖျော်ဖြေဖို့ကျနော်တို့အနေနဲ့ဝယ်ယူစံနှုန်းထူထောင် Mitchell က et al ။ (2005) တက်ကြွစွာစက်ပစ္စည်းတွင်တုံ့ပြန်မှုများ၏ bimodal ဖြန့်ဖြူးများ၏ကျင်းသုံးပြီးအားလုံး Self-အုပ်ချုပ်ရေးအစည်းအဝေးများကျော်တတ်သည်။ အဆိုပါကျင်းအဆိုပါကျင်းတန်ဖိုးကိုထက်ပိုမိုတုံ့ပြန်ကြွက်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးအပြုအမူဝယ်ယူခဲ့ကြသော်လည်းယင်းကျင်းတန်ဖိုးကိုထက်လျော့နည်းတုံ့ပြန်ကြွက်သေး, နှာခေါင်း Poke နဲ့ဆုလာဘ်များအကြားဆက်ဆံရေးသင်ယူကြပြီမဟုတ်မထွက်ရ, အပြုအမူအတွက်အပြောင်းအလဲတစ်ခုအမှတ်ကိုယ်စားပြုတယ်။ ကျနော်တို့ကြွက် (မြီးကောင်ပေါက်များ၏သီးခြားကြီးမားသောဆောင်များတွင်အသုံးပြုသော, n = 55; အရွယ်ရောက်ပြီးသူ, n မြီးကောင်ပေါက်နောက်တဖန်အရွယ်ရောက်ထက် သာ. ကြီးမြတ်စားသုံးမှုပြသခဲ့သည်ရသော = 58), (သဖန်းသီး။ 2A; အသက်အရွယ်အကျိုးသက်ရောက်မှု, F(1,111) = 26.89, p <0.001) ။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူများသည်နှာခေါင်း ၁၅ ခုကိုထိုးကျိတ်ဖြင့်နှာခေါင်းထိုးခြင်းအား bimodal ဖြန့်ဝေသည်ကိုပြသခဲ့သည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်မြီးကောင်ပေါက်များသည်တုန့်ပြန်မှုနှုန်းနိမ့်ကျခြင်းကြောင့် (bimodal distribution) ကိုမပြခဲ့ကြပါ။သဖန်းသီး။ 2C), Self-အုပ်ချုပ်ရေးကိုပိုမိုလျင်မြန်စွာဝယ်ယူအကြံပြုခြင်း။ တကယ်တော့, 15 တာဟာများ၏ဝယ်ယူစံနှုန်းကို အသုံးပြု. မြီးကောင်ပေါက် (ကပိုမိုမြန်ဆန်ခြင်းနှင့်ဝယ်ယူပိုမိုနှုန်းသည်လူကြီးများထက်ပြသသဖန်းသီး။ 2B; Fisher ရဲ့အမြီးနှစ်ခုအမြီး, p = 0.001) ။ ထို့အပြင်ပြီးခဲ့သည့်နေ့, အရွယ်ရောက် 29% မြီးကောင်ပေါက်သာ 5% အထိဆန့်ကျင်အဖြစ်ဝယ်ယူစံဖြည့်ဆည်းရန်ပျက်ကွက်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်, မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ရောက်ကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးဆည်းပူးဖို့နဲ့ပိုပြီးလျှင်မြန်စွာကြောင့်ဆည်းပူးဖို့ထက်ပိုမိုဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိကြ၏။
Sha (600 ဇ) စဉ်အတွင်းတစ်အလယ်အလတ်ထိုး (ပြုတ်ရည်နှုန်း 1.5 μg / ကီလိုဂရမ်) မှာကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးသိမ်းယူမှုပုံစံ။ Aအဆိုပါဝယ်ယူစံထူထောင်ရန်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အသုံးပြုသောဆောင်များတွင်အတွက်စားသုံးမှု။ တစ်ခုချင်းစီကိုအမှတ် 1.5 ဇ Self-အုပ်ချုပ်ရေးအစည်းအဝေးများ၏တစ်ဦးချင်းစီအတွက်တစ်ဦးချင်းစီအဖွဲ့ SEM ±ယုတ်ကိုကိုယ်စားပြုတယ်။ Inset တစ် 1.5 ဇ Self-အုပ်ချုပ်ရေး session တစ်ခုကျော်ဆယ်ကျော်သက်တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးအရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်အနေဖြင့်ကိုယ်စားလှယ်ပြုတ်ရည်မှတ်တမ်းများ။ Bကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေး, သိမ်းယူမှုနှုန်းသည်။ လိုင်းဝယ်ယူစံမပြည့်စုံကြောင်းကြွက်များ၏ရာခိုင်နှုန်းကိုကိုယ်စားပြုသည်။ C, နှာခေါင်း၏ဖြန့်ဖြူးကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေး၏ဝယ်ယူစဉ်ကတက်ကြွစွာတွင်း၌ pokes ။ နှာခေါင်းအရေအတွက်အားလုံးကြွက်များကနေ pokes အပေါင်းတို့နှင့်အစည်းအဝေးများ5၏ကြားကာလအတွက် binned နေကြသည်။ ဘားတစ်ဦးချင်းစီအထူးသဘင်ကြားကာလမှာတက်ကြွစွာပေါက်နှာခေါင်း Poke ၏နံပါတ်ရှိပါသည်။ မြီးကောင်ပေါက်, n = 55; အရွယ်ရောက်ပြီးသူ, n = 58 ။
ကိုကင်းစားသုံးမှုအတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုမလုံလောက်နမူနာအချိန်တွေကပေါ်ကနေမဟုတ်ကြကြောင်းသေချာစေရန်, ငါတို့သည်လည်းကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးမှ LgA ကာလအတွင်းအရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်နှိုင်းယှဉ်ဆယ်ကျော်သက်များ၏ဝယ်ယူအပြုအမူနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ။ အဖြစ် ပုံ3ရှိုးများ, ဆယ်ကျော်သက်တစ်ဦး LgA လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတွက်လူကြီးများ (6 ဇအစည်းအဝေးများ) (အသက်အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်လျှင် သာ. ကွီးမွတျကိုကင်းစားသုံးမှုပြသ F(1,19) = 25.45, p <0.001; session အကျိုးသက်ရောက်မှု, F(9,171) = 9.89, p <0.001; age × session interaction, F(9,171) = 3.41, p <0.001) ။
LgA (600 ဇ) စဉ်အတွင်းတစ်အလယ်အလတ်ထိုး (ပြုတ်ရည်နှုန်း6μg / ကီလိုဂရမ်) မှာကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးအပြုအမူ၏သိမ်းယူမှု။ တစ်ခုချင်းစီကိုအမှတ်6ဇ Self-အုပ်ချုပ်ရေးအစည်းအဝေးများ၏တစ်ဦးချင်းစီအတွက်တစ်ဦးချင်းစီအဖွဲ့ SEM တာဟာ±ယုတ်ကိုကိုယ်စားပြုတယ်။ မြီးကောင်ပေါက်, n = 9; အရွယ်ရောက်ပြီးသူ, n = 12 ။
စမ်းသပ်မှု 2: ကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးတင်းမာမှုအပေါ်အသက်အရွယ်ကွဲပြားခြားနားမှု
အုပ်စုများအကြားစားသုံးမှုညီမျှဖို့, တင်းမာမှုလျှော့ချစမ်းသပ်ရှေ့ပြေးသောလေ့ကျင့်ရေးအစည်းအဝေးများကာလအတွင်းစားသုံးမှု (session တစ်ခုနှုန်း 15-20 တာဟာဖို့ကန့်သတ်ခဲ့သည်သဖန်းသီး။ 4A; အသက်အရွယ်အကျိုးသက်ရောက်မှု, F(1,18) = 2.56, NS, session ကိုအကျိုးသက်ရောက်မှု, F(7,126) = 3.53, p <0.01; age × session interaction, F(7,126) = 0.39, NS) ။ ဤသင်တန်းမှအစည်းအဝေးများကာလအတွင်းမြီးကောင်ပေါက်သို့ရောက်ရှိ 15-20 တာဟာ (မှာလူကြီးများထက်ပိုမြန်ခဲ့ကြသဖန်းသီး။ 4A, inset; t(20) = -2.92, p <0.01) ။ ထို့နောက်ကြွက်များအားသင်တန်းကာလအတွင်းအလားတူစားသုံးမှုနှင့်အတူ (SHA နှင့် LgA အုပ်စုများ) ခွဲခြားထားသည်။ F(1,18) = 0.006, NS, အုပ်စုတစ်စုအပြန်အလှန်×အသက်, F(1,18) = 0.12, NS) ။
တစ်ဦးအလယ်အလတ်ထိုး (ပြုတ်ရည်နှုန်း 600 μg / ကီလိုဂရမ်) မှာကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးစက်လှေကား။ Aတစ်ဦးချင်းစီ session တစ်ခု 15 ဇအများဆုံးရေရှည်အတူ 20 ဃများအတွက်နှစ်ကြိမ်တစ်နေ့လျှင်အားလုံးအုပ်စုများ session တစ်ခုနှုန်း Self-စီမံခန့်ခွဲ 4-3 တာဟာဖို့ကန့်သတ်ခံခဲ့ရသည့်အတွက်လေ့ကျင့်ရေးအစည်းအဝေးများ, ကန့်သတ်ထား။ Inset, အချိန် session တစ်ခုနှုန်း 15-20 တာဟာ (; အဖြူရောင်ဘား, အရွယ်ရောက်အနက်ရောင်ဘား, မြီးကောင်ပေါက်) ရောက်ရှိဖို့ရန်လိုအပ်သည်။ B,6ဇ LgA အစည်းအဝေးများကာလအတွင်းစားသုံးမှု။ Cအဆိုပါ Sha အုပ်စုနှင့် LgA အုပ်စုတွင်ပထမဦးဆုံး 1.5 ဇများအတွက် 1.5 ဇစဉ်အတွင်းစားသုံးမှု။ တစ်ခုချင်းစီကိုအချက်တစ်ဦးချင်းစီ Self-အုပ်ချုပ်ရေး session တစ်ခုစီအဖွဲ့ SEM တာဟာ±ယုတ်ကိုကိုယ်စားပြုတယ်။ မြီးကောင်ပေါက် LgA, n = 5; Sha adolescents, n = 5; အရွယ်ရောက် LgA, n = 6; နှင့်လူကြီးများ Sha, n =6။ *p <0.05; **p <0.01; ***p <0.001 နေ့က 1 နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ။
ကျနော်တို့ပထမဦးဆုံး LgA အုပ်စုများအတွက်6ဇကျော်စားသုံးမှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ အဖြစ် ပုံ 4B ရှိုးများ, မြီးကောင်ပေါက် (ခြုံငုံအသက်အရွယ်အကျိုးသက်ရောက်မှုလူကြီးများထက် ပို. ကင်းကို ယူ. , F(1,9) = 12.27, p <0.01); စားသုံးမှုအချိန်ကျော်ပြောင်းလဲသွားတယ် (session ကိုအကျိုးသက်ရောက်မှု, F(11,99) = 6.76, p <0.001), နှင့်အသက်အုပ်စုများအကြားဆက်ဆံရေးကိုလည်းအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှပြောင်းလဲသွားတယ် (age × session ကိုအပြန်အလှန်, F(11,99) = 8.31, p <0.001) ။ တကယ်တော့ကိုကာကိုလာစားသုံးမှုပိုမိုမြင့်တက်လာမှုကိုဆယ်ကျော်သက်များ (ဆယ်ကျော်သက်လူငယ်များအတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှု၊ F(11,44) = 3.4, p <0.002) ဒါပေမယ့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူမဟုတ် (လူကြီးများအတွက် session ကိုအကျိုးသက်ရောက်မှု, F(11,55) = 1.2, NS) ။ အထူးသမြီးကောင်ပေါက်ထဲမှာကိုကင်းစားသုံးမှု (session တစ်ခု4ထံမှတိုးမြှင့်ဖို့စတင်ခဲ့p <0.05 session ကို 1 နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ) နှင့် (အားလုံးအားလုံး) အဲဒီနောက်တိုးမြှင့်ဖို့ဆက်ပြောသည် p တန်ဖိုးများကို <0.01) ။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်အရွယ်ရောက်သူများတွင်ကိုကင်းသုံးစွဲမှုသည်ဘယ်သောအခါမျှမတိုးတက်ခဲ့ပါ။
ကျနော်တို့ထို့နောက် (ကြွက်နှစ်ဦးစလုံးအုပ်စုများတစ်ခုချင်းစီမှ session ရဲ့ပထမဦးဆုံး 1.5 ဇထံမှစားသုံးမှုကိုခွဲခြားစိတ်ဖြာခြင်းဖြင့် Sha နှင့် LgA အခြေအနေများအောက်တွင်တင်းမာမှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါAhmed ကနှင့် Koob, 1998); ဒီကြားက-ဘာသာရပ်အတွင်း-ဘာသာရပ်အချက်အဖြစ်အချက်များနှင့် session တစ်ခုအဖြစ်အသက်နှင့် Access အခြေအနေနှင့်အတူပြုလေ၏။ အဖြစ် ပုံ 4C ရှိုးများ, ဖမြီးကောင်ပေါက် (ခြုံငုံအသက်အရွယ်အကျိုးသက်ရောက်မှုလူကြီးများထက် ပို. ကင်းကို ယူ. , F(1,18) = 13.04, p <0.001); စားသုံးမှုအချိန်ကျော်ပြောင်းလဲသွားတယ် (session ကိုအကျိုးသက်ရောက်မှု, F(11,99) = 3.54, p <0.001), နှင့်အသက်အုပ်စုများနှင့်ဝင်ရောက်ခွင့်အခြေအနေအကြားဆက်ဆံရေးကိုလည်းအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှပြောင်းလဲသွားတယ် (age × session ကိုအပြန်အလှန်, F(11,198) = 4.55, p <0.001; အသုံးပြုခွင့်အခြေအနေ× session interaction၊ F(11,198) = 1.84, p <0.05) ။ အုပ်စုတစ်ခုချင်းစီ၏နောက်ဆက်တွဲခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း (အသက်နှင့် ၀ င်ခွင့်အခြေအနေအရခွဲခြားထားခြင်း) သည် LgA အခြေအနေများ (ဆယ်ကျော်သက်အရွယ် LgA) အောက်ရှိဆယ်ကျော်သက်ကြွက်များတွင်အဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဖော်ပြခဲ့သည်။ F(11,44) = 3.38, p <0.01; လူကြီး LgA, F(11,55) = 1.20, NS, ဆယ်ကျော်သက် Sha, F(11,44) = 1.78, NS, အရွယ်ရောက်ပြီးသူ Sha, F(11,55) = 1.65, NS) ။ post ကို hoc စမ်းသပ်မှုများ (LgA နှင့်အတူဆယ်ကျော်သက်များအတွက်, စားသုံးမှု session တစ်ခု 8 မှဆွေမျိုး မှစ. session တစ်ခု 1 ကနေတိုးတက်ကြောင်းပြသp <0.05) ။ ထို့ကြောင့်ပထမစမ်းသပ်မှု ၁.၅ နာရီသာစဉ်းစားသောအခါ၌ပင် LgA နှင့်အတူဆယ်ကျော်သက်များ၌သော်လည်းဆယ်ကျော်သက်များနှင့် ShA နှင့် LgA အခြေအနေများရှိအရွယ်ရောက်သူများ၌ကိုကိုစားသုံးမှုနှုန်းမြင့်တက်လာခြင်းကိုလေ့လာခဲ့သည်။
As ပုံ 5A ရှိုးများ, မြီးကောင်ပေါက်နှာခေါင်းမြင့်မားထိုး (ပြုတ်ရည်နှုန်း 1200 μg / ကီလိုဂရမ်) မှာကင်းဘို့ထက်ပိုမိုအရွယ်ရောက်ပွူ။ တက်ကြွစွာအပေါက်အဘို့, FR လိုအပ်ချက်အဖြစ်တိုးမြှင့တုံ့ပြန် (ဆိုလိုသည်မှာ, စျေးနှုန်း), (အချိုးသက်ရောက်တိုးလာ F(4,68) = 15.55, p <0.001), ဤလူကြီးများထက်ဆယ်ကျော်သက်များအတွက်ပိုမိုဒါဖြစ်ပွားခဲ့သည် (သဖန်းသီး။ 5; အသက်အရွယ်အကျိုးသက်ရောက်မှု, F(1,17) = 11.38, p <0.01; အသက်×အချိုးအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှု၊ F(4,68) = 2.85, p <0.05) ။ အထူးသဖြင့်ဆယ်ကျော်သက်များသည်လူကြီးများထက်စျေးနှုန်းမြင့်မားစွာတုန့်ပြန်ကြသည် (FR6၊ p <0.01; FR12, p <0.05; နှင့် FR24, p <0.05) ဒါပေမယ့်စျေးနှုန်းနိမ့် (FR1 နှင့် FR3, ns) မှာမဟုတ်ပါဘူး။ အချိုးတိုးမြှင့်သည့်အတွက်မလှုပ်မရှားဖြစ်နေသောအပေါက်များကတုံ့ပြန်မှုသည်မပြောင်းလဲပါ။ F(4,68) တစ်ခုခုကိုအသက်အရွယ်အုပ်စု = 1.77, NS) (အသက်အကျိုးသက်ရောက်မှု, F(1,17) = 3.04, NS, အချိုးအပြန်အလှန်×အသက်, F(4,68) = 0.41, NS) ။ အချိုးခွဲခြားဆက်ဆံမှုလူကြီးများ (အပေါက်အကျိုးသက်ရောက်မှုထက်မြီးကောင်ပေါက်တစ်ခုအစောပိုင်းကဇာတ်စင်မှာသိသာဖြစ်လာအတူတိုးပွားလာအဖြစ်တက်ကြွစွာနဲ့မလှုပ်မရှားအပေါက်အကြားခွဲခြားဆက်ဆံမှုစေ့စ့စပ်စပ်ထင်ရှားခဲ့ပါတယ်, F(1,17) = 63.09, p <0.001; အချိုးအစား×အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှု၊ F(4,68) = 21.10, p <0.001; အချိုးအစား×အပေါက်×အရွယ်သက်ရောက်မှု၊ F(4,68) = 3.71, p <0.01) ။ အထူးသဖြင့်ဆယ်ကျော်သက်များသည် FR6, FR12 နှင့် FR24 တို့တွင်ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းခံရသည်။p <0.05), အရွယ်ရောက်ပြီးသူများကို FR12 နှင့် FR24 တို့တွင်ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းသော်လည်း (p <0.05) ။
စျေးနှုန်းတစ် function ကိုအဖြစ်ကိုကင်း (ပြုတ်ရည်နှုန်း 1200 μg / ကီလိုဂရမ်) ၏ self-အုပ်ချုပ်မှု။ Aကိုကင်းများ၏စျေးနှုန်းမူးယစ်ဆေးရယူဖို့ FR တိုးပွားလာအသုံးပြုပုံတိုးပွါးသောအခါ, နှာခေါင်းအရေအတွက် pokes ။ Bစျေးနှုန်းတစ် function ကိုအဖြစ်ကိုကင်း၏စားသုံးမှု (Self-တာဟာအရေအတွက်) (ဆိုလိုသည်မှာအချိုး), တစ်ဦးလော်ဂရစ်သမ်စကေးအပေါ်ကြံစည်မှုနှင့်အဆဝယ်လိုအားညီမျှခြင်းအရသိရသည် fit ။ Q0, အနိမ့်ဆုံးစျေးနှုန်းမှာစားသုံးမှု၏အဆငျ့; α, ကိုကင်းဝယ်လိုအား၏ elasticity; : Pmax ကို, အပြုအမူ elastic မှ inelastic ကနေပြောင်းရွှေ့ရသည်ဖြစ်သောမှာစျေးနှုန်း။ R2, အကွေးမထိုက်မတန်ဘို့ဆက်စပ်မှု၏ကိန်း၏စတုရန်း (ပြဋ္ဌာန်းဆိုလိုသည်မှာအဆိုပါကိန်း) ။ တစ်ခုချင်းစီကိုအချက်တစ်ဦးချင်းစီအချိုးအဘို့ဒုတိယနေ့၌အုပ်စုတစ်ခုချင်းစီ၏ဆိုလို± SEM တန်ဖိုးများကိုကိုယ်စားပြုတယ်။ မြီးကောင်ပေါက်, n = 7; အရွယ်ရောက်ပြီးသူ, n = 12 ။ *p <0.05; **p <0.01 လူကြီးများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ။
ကျနော်တို့ကတည်ထောင်သည့်အဆဝယ်လိုအားမျဉ်းကွေးဖို့ဒေတာကိုသင့်လျော်သဖြင့်စျေးနှုန်းတစ် function ကို (ဆိုလိုသည်မှာအချိုး) အဖြစ်စားသုံးမှု (Self-တာဟာ၏ဆိုလိုသည်မှာနံပါတ်) ကွဲပြားသောထုံးစံခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ Hursh နှင့် Silberberg (2008)။ မြီးကောင်ပေါက်နှင့်လူကြီးများနှစ်ဦးစလုံးထံမှဒေတာများကိုကောင်းမွန်စွာကွေး fit (R2 = မြီးကောင်ပေါက်အဘို့အ 0.94; R2 = လူကြီးများအတွက် 0.96), နှင့်ဤခါးဆစ်ကနေတန်ဖိုးများမှာပြနေကြသည် ပုံ 5ခမေး0 (အနိမ့်ဆုံးစျေးနှုန်းမှာအလုပျသစားသုံးမှု) (အသက်အရွယ်မရွေးကိုဖြတ်ပြီးဆင်တူခဲ့သည်F(1,5) = 0.001, NS) ။ စားသုံးမှုစျေးနှုန်းတစ် function ကိုအဖြစ်ငြင်းဆိုခဲ့သည်နှင့်ကျဆင်းမှုလူကြီးများနှိုင်းယှဉ်မြီးကောင်ပေါက်အတွက်လျော့နည်းမတ်စောက်သောဖြစ်ခဲ့သည်။ ဆိုလိုသည်ကားမြီးကောင်ပေါက် (အရွယ်ရောက်သူထက်သေးငယ်αခဲ့F(1,5) = 10.45, p <0.05), ဝယ်လိုအားလူကြီးများထက်ဆယ်ကျော်သက်များတွင်ပိုပြီး inelastic ခဲ့ကြောင်းညွှန်ပြ။
စမ်းသပ်မှု 4: အသက်အရွယ်ကိုကင်းများ၏အဆင့်ဆင့်အပေါ်ကွဲပြားခြားနားမှုများနှင့်ဦးနှောက်အတွက်၎င်း၏ metabolites
သွေးထဲတွင်ကိုကင်း၏အောက်ပိုင်းအဆင့်ဆင့်ရှိသည်ဖို့မြီးကောင်ပေါက်တစ်လမ်းကြောင်းသစ်ရှိခဲ့သည် (923.24, ml / 67.32 ± 1119.73 ng vs 66.94 ± t(9) = -2.05, p = 0.070) သော်လည်းမဦးနှောက်ထဲမှာ (5135.20 vs 281.25 ± 6947.00, 971.28 ng / g ± t(9) = -1.64, NS) ။ အသွေး၌ကင်း metabolite benzoylecgonine ၏အောက်ပိုင်းအဆင့်ဆင့်ရှိသည်ဖို့မြီးကောင်ပေါက်တစ်လမ်းကြောင်းသစ် 754.72 ± 81.09 ng vs 1086.70 ± 133.07, ml / (လည်းရှိခဲ့သည် t(9) = -2.02, p = 0.074) နှင့်ဦးနှောက်အတွက် (123.30 ± 13.80 ng / g vs 184.38 ± 25.15, t(9) = -2.00, p = 0.076) ။ အသွေး၌ကင်း metabolite ecgonine-methyl-Ester ၏အဆင့်ဆင့်မသိသိသာသာအသက်အရွယ်ကွဲပြားခြားနားမှု 105.84 ± 5.08 ng vs 87.27 ± 9.48, ml / (ရှိခဲ့သည် t(9) = 1.62, NS) သို့မဟုတ်ဦးနှောက် (138.54 vs 9.62 ± 146.44, 5.36 ng / g ± U(11) = 14.00, Z = -0.09, NS) ။ အသွေး၌ metabolite norcocaine မကွဲပြားမှု (8.28 ± 0.96 vs 11.77 ± 1.72 လည်းရှိခဲ့သည် t(9) = -1.67, NS) ။ ဦးနှောက်ထဲမှာ Norcocaine အဆင့်ဆင့်အများဆုံးနမူနာ (Data ပြမပါ) အတွက်သိရှိနိုင်ခဲ့ကြသည်။
Vivo အတွက် VTA အာရုံခံ၏ extracellular အသံဖမ်း
လူကြီးများမှဆွေမျိုး, မြီးကောင်ပေါက် ~1 Hz (~24%) (နေဖြင့် VTA dopamine အာရုံခံမြင့်မားပစ်ခတ်ရန်နှုန်းထားများပြသဖန်းသီး။ 6A; t(41) = 2.33; p <0.05) ။ ပေါက်ကွဲမှုပမာဏသည်အသက်အရွယ်မရွေးတူညီသည်။ ဤသည်ကို burst အတွင်းထုတ်လွှတ်သော spike ၏ရာခိုင်နှုန်းအဖြစ်တိုင်းတာခဲ့သည် (သဖန်းသီး။ 6A; t(41) = 0.30; NS) နှင့်ကွဲဖြစ်ရပ်များ၏ကြိမ်နှုန်း (0.46 ± 0.08 Hz vs 0.51 ± 0.09, t(41) = -0.40; NS) ။ သို့သော်ဆယ်ကျော်သက် (ပေါကျကှဲနှုန်းကပို spikes အတူလူကြီးများထက်ပိုကြီးတဲ့ပေါကျကှဲဖြစ်ရပ်များပြသဖန်းသီး။ 6A; t(41) = 2.28; p <0.05) နှင့်ပိုမိုကြာမြင့်စွာကွဲကြာချိန် (256.76 ± 35.12 vs 157.60 ± 33.40 ms) ဆီသို့ ဦး တည်လမ်းကြောင်း, t(47) = 2.01, p = 0.051) ။ အဖြစ် ပုံ 6B ရှိုးများ, နမူနာသော VTA ၏ဧရိယာအသက်အရွယ် (အသက်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဖြတ်ပြီးနှိုင်းယှဉ်ခဲ့ပါတယ်, F(1,41) = 2.71, NS, ဖွဲ့စည်းပုံအပြန်အလှန်×အသက်, F(2,82) = 0.28, NS) ။ ; anteroposterior, 3.57 ± 0.04 vs 3.66 ± 0.05 အောက်ပါအတိုင်းလူကြီးများနှိုင်းယှဉ်မြီးကောင်ပေါက်အဘို့ (မီလီမီတာအတွက်) ကိုသြဒီနိတ်ခဲ့ကြသည် mediolateral, 0.84 0.05 ± 0.97 vs 0.07 ±; dorsoventral, 7.79 0.05 ± 7.84 vs 0.04 ±။ ရလဒ်များအစာရှောင်ခြင်းအစိမ်းရောင်ဆိုးဆေးနှင့်အတူမှတ်သားသာနောက်ဆုံးမှတ်တမ်းတင်ထားသောဆဲလ်ဆန်းစစ်ခဲ့သည်ဆိုပါကအလားတူခဲ့ကြသည် (Data ပြမပါ) ။
Adopamine အာရုံခံ၏, လုပ်ဆောင်ချက်။ နှုန်းကိုပစ်ခတ်လက်ဝဲ, spikes (ရာခိုင်နှုန်း) စိမ်းဖြင့်အလယ်တန်း, ညာဘက်ဆက်တိုက်နှုန်း spikes ။ တစ်ခုချင်းစီကိုဒေါင်လိုက်ဘားအုပ်စုတစ်ခုချင်းစီ၏± SEM ဆိုလိုကိုယ်စားပြုတယ်။ မြီးကောင်ပေါက်, n 24 ကြွက်ထံမှ = 11 ဆဲလ်; အရွယ်ရောက်ပြီးသူ, n 19 ကြွက်ထံမှ = 11 ဆဲလ်တွေ။ *p <0.05 လူကြီးများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ။ Bအဆိုပါ VTA အတွက်နမူနာ dopamine အာရုံခံ၏တည်နေရာ။ (မီလီမီတာအတွက်) တည်နေရာ, lambda (AP) မှ anteroposterior အဆိုပါ midline (ML) မှ mediolateral, နှင့် cortex (DV) ၏မျက်နှာပြင်ကနေ dorsoventral ဖြစ်ကြသည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုစက်ဝိုင်း / စတုရန်းတစ်ခုတည်း dopamine အာရုံခံဆဲလျ၏တည်နေရာကိုကိုယ်စားပြုတယ်။ Cအတွက်ရင်ပြင်ကကိုယ်စားပြုဆဲလ်ကနေကိုယ်စားလှယ် histological ပုံရိပ်တွေ B။ လျှပ်ကူးပစ္စည်းနေရာချထားတဲ့အနက်ရောင်မြှားနှင့်အတူမှတ်သားသည်။ အဆိုပါအနက်ရောင်လိုင်းတစ်ဦးကိုကိုးကားအမှတ်အသားတစ်ခုဖြစ်သည်နှင့်အဏု၏ Ocular အပိုင်းအစ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ကျနော်တို့ pharmacologically dopamine အာရုံခံဆဲလျလှုပ်ရှားမှုပြုပြင်မွမ်းမံပြီးအလယ်အလတ်ထိုး (ပြုတ်ရည်နှုန်း 600 μg / ကီလိုဂရမ်) မှာကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးအပေါ်သက်ရောက်မှုကိုဆန်းစစ်နေဖြင့် dopamine အာရုံခံဆဲလျလှုပ်ရှားမှုနဲ့ Self-အုပ်ချုပ်ရေးအကြားဆက်ဆံရေးကိုစမ်းသပ်။ Quinpirole တစ်ဦး: D2 အဲဒီ receptor agonist တစ်ဦး: D, အာရုံခံဆဲလျလှုပ်ရှားမှုနှင့် eticlopride လျော့ချဖို့အသုံးပြုခဲ့သည်2 အဲဒီ receptor ရန်, (အာရုံခံဆဲလျလှုပ်ရှားမှုတိုးမြှင့်ဖို့အသုံးပြုခဲ့သည်Marinelli et al ။ , 2003) ။ ကြွက်ပထမဦးဆုံး 1 ဃ (Data ပြမဟုတ်) များအတွက် FR2 မှာလေ့ကျင့်သင်ကြားကြသည် ဟူ. ၎င်း, ထို့နောက်သူတို့3နောက်ထပ်ရက်ပေါင်း FR4 မှာလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခဲ့သည်။ ကြွက်ထို့နောက်အလားတူကင်းစားသုံးမှု (မူးယစ်ဆေးအကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်အတူအုပ်စုသုံးစုခွဲခဲ့ကြသည်, F(2,61) ဆား, quinpirole (2.08 μg / ကီလိုဂရမ်, SC) သို့မဟုတ် eticlopride (0.2 μg / ကီလိုဂရမ်, SC) ကိုလက်ခံရရှိရန်စီစဉ်ထားကြသည် = 0.2, NS) ။ မှာပြထားတဲ့အတိုင်း ပုံ 7, pretreatment ကာလအတွင်းကင်းစားသုံးမှုအတွက်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကွဲပြားခြားနားမှုနှိုင်းယှဉ်ဆယ်ကျော်သက်, အသက်အကျိုးသက်ရောက်မှု (အားလုံးအုပ်စုများအတွက်ထိန်းသိမ်းထားခဲ့သည် F(1,61) = 31.08, p <0.001; မူးယစ်ဆေးဝါးအကျိုးသက်ရောက်မှု, F(2,61) = 2.08, NS, မူးယစ်ဆေးအပြန်အလှန်×အသက်, F(2,61) = 1.68, NS) ။ ကျနော်တို့ထို့နောက်ကုသမှု (posttreatment) အပြီးနှိုင်းယှဉ် (pretreatment, ကုသမှုမပြုမီ3ဃ၏ပျှမ်းမျှ) မတိုင်မီအပြုအမူနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ။ ဤသည်တို့အကြား-ဘာသာရပ်အချက်များအဖြစ်အချိန်အမှတ် (post ကို vs ကြိုတင်) အတွင်း-ဘာသာရပ်အချက်နှင့်အသက်အရွယ်အဖြစ် (အရွယ်ရောက်သူ vs မြီးကောင်ပေါက်) နှင့်မူးယစ် (ဆား, quinpirole, eticlopride) ကို အသုံးပြု. ပြုလေ၏။ : အချိန်-အမှတ်အပြန်အလှန်× (မူးယစ်ဆေးအုပ်ချုပ်သောမူးယစ်ဆေးနှင့်အညီပြောင်းလဲသွားအပြုအမူ F(2,61) = 14,43, p <0.001) နှင့်ဘာသာရပ်များ၏အသက်အရွယ် (အရွယ်×အချိန် - အမှတ်အပြန်အလှန်, F(1,61) = 11.96, p <0.001; အသက်×မူးယစ်ဆေး×အချိန်ကာလအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှု၊ F(2,61) = 6.84, p <0.01) ။ အထူးသဖြင့်ဆားကုသမှုသည်မည်သည့်အသက်အရွယ်တွင်မဆိုဆယ်ကျော်သက်များသည်အရွယ်ရောက်ပြီးသူများထံမှကိုကာကိုလာပိုမိုသုံးစွဲမှုကိုမြင့်မားစေခဲ့သည်။ p <0.05; posttreatment vs NS ကြိုတင်ကုသမှု) ။ Quinpirole သည်မြီးကောင်ပေါက်များ၌ကိုကင်းပမာဏကိုဖိအားပေးခြင်းဖြင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်များကို“ အရွယ်ရောက်သူကဲ့သို့” ဖြစ်စေသည်။ (ကုသမှုလွန်ပြီးနောက်၊ လူကြီးများနှင့်လူကြီးများ၊ လူငယ်များ၊ ns; မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်များကိုကြိုတင်ကုသမှု၊ p <0.05) ။ Eticlopride သည်လူကြီးများတွင်ကိုကင်းပမာဏကိုတိုးပွားစေပြီး“ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်အရွယ်ရောက်ပြီးသူနှင့်လူကြီးများ၊ ns; အရွယ်ရောက်ပြီးသူများနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူများကိုကြိုတင်ကုသမှု၊ p <0.001) ။ quinpirole ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုသည်ဆယ်ကျော်သက်များ၏မြင့်မားသောအခြေခံ (pre-quinpirole) အပြုအမူ၏ရှေးဟောင်းပစ္စည်းတစ်ခုမဟုတ်ကြောင်းသေချာစေရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအုပ်စုတွင်အခြေခံစားသုံးမှုနှင့်အတူဆယ်ကျော်သက်ကြွက်သုံးချောင်းကိုဖယ်ထုတ်ပြီးနောက်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆန်းစစ်မှုကိုထပ်ခါတလဲလဲပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဤကြွက်များကိုဖယ်ရှားသည့်တိုင်အောင်ရလဒ်များမှာအလားတူဖြစ်သည် (အချက်အလက်များကိုမပြပါ)
(အကြို) ရှေ့တော်၌အလယ်အလတ်ထိုး (ပြုတ်ရည်နှုန်း 600 μg / ကီလိုဂရမ်) မှာ dopamine အာရုံခံဆဲလျလှုပ်ရှားမှုပြုပြင်မွမ်းမံကြောင်းမူးယစ်ဆေးဝါး (Post ကို) အုပ်ချုပ်ရေးပြီးနောက်ကင်း Self-အုပ်ချုပ်မှု။ တစ်ခုချင်းစီကိုဒေါင်လိုက်ဘားအုပ်စုတစ်ခုချင်းစီ၏ SEM တာဟာ / 1.5 ဇ±ယုတ်ကိုကိုယ်စားပြုတယ်။ အကြိုတန်ဖိုးများကိုမူးယစ်ဆေးအုပ်ချုပ်ရေးရှေ့တော်၌ထို3ဃကာလအတွင်းပျမ်းမျှအားဖြစ်ကြသည်။ Post ကိုတန်ဖိုးများကိုချက်ချင်းမူးယစ်ဆေးအုပ်ချုပ်ရေးပြီးနောက်ဖြစ်ကြသည်။ မြီးကောင်ပေါက်, n အသီးသီးဆား, quinpirole နှင့် eticlopride များအတွက် = 11, 12 နှင့် 11; အရွယ်ရောက်ပြီးသူ, n = အသီးအသီးအုပ်စုထဲမှာ 11 ။ *p <0.05; ***p <0.001 လူကြီးများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ။ #p <0.05; ###p <0.001 Pre နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်များကို, လူကြီးများမှဆွေမျိုး, မြီးကောင်ပေါက် (ဆိုလိုသည်မှာပိုမို inelastic ဖြစ်ကြောင်း) ကိုကင်းပိုမိုစားသုံးမှုကိုပြပိုမိုလျှင်မြန်စွာကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးဆည်းပူး, ကိုကင်းစားသုံးမှု၏ပြပွဲတင်းမာမှုသည်မူးယစ်ဆေးအဘို့အခက်ခဲအလုပ်မလုပ်ခြင်းနှင့်စျေးနှုန်းမြင့်တက်လာမှလျော့နည်းထိခိုက်မခံဖြစ်ကြောင်းပြသ ။ ထို့အပွငျမွငျ့မားသောကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေး VTA dopamine အာရုံခံ၏မြင့်မားသောလှုပ်ရှားမှုနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့ quinpirole အဲဒီအာရုံခံ၏လုပ်ဆောင်မှုကိုဖိနှိပ်တဲ့မူးယစ်ဆေးဝါးတွေနဲ့ပြောင်းပြန်နိုငျသညျ။
လူကြီးများနှင့်နှိုင်းယှဉ်မြီးကောင်ပေါက်အနိမ့်-to-အလယ်အလတ်ဆေးများ (150-600 ပြုတ်ရည်နှုန်းμg / ကီလိုဂရမ်) မှာကင်း သာ. ကြီးမြတ်စားသုံးမှုပြသခဲ့သည်။ ကြွက်မြီးကောင်ပေါက်နှင့်လူကြီးများအကြားခြားနားချက်မလုံလောက်နမူနာအချိန်တစ်ခုရှေးဟောင်းပစ္စည်းမဟုတ်ခဲ့ကြောင်းအကြံပြု, ကိုကင်းဖို့ Sha သို့မဟုတ် LgA ဖြစ်စေပေးခဲ့သည့်အခါခြီးမွှောကျကင်းစားသုံးမှုကိုတှေ့မွငျခဲ့သညျ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်များကိုတစ်ဦးအတန်အသင့်အနိမ့်ထိုး [ပြုတ်ရည်နှုန်း 400 μg / ကီလိုဂရမ် (မှာလူကြီးများထက် Self-စီမံခန့်ခွဲပိုပြီးကင်း adolescents ဖေါ်ပြခြင်းနှစ်ခုလေ့လာမှုများနှင့်အတူလိုင်း၌ရှိကြ၏Anker နှင့်ကာရိုး, 2010)] တစ်ခုသို့မဟုတ်အတန်အသင့်မြင့်မားထိုး [ပြုတ်ရည်နှုန်း 800 μg / ကီလိုဂရမ် (Schramm-Sapyta et al ။ , 2011)] ။ ကျနော်တို့ကိုအမြီးကောင်ပေါက်ကင်းမှလူကြီးများထက် ပို. အထိခိုက်မခံဖြစ်ကြောင်းဆုံးဖြတ်ရန်ခွင့်ပြုထားတဲ့ပမာဏ၏တစ်ဦးပိုမိုကျယ်ပြန်အကွာအဝေး, အသုံးပြု. ဤလုပ်ငန်းကိုတိုးချဲ့။ အလားတူနိမ့်အလယ်အလတ်ဆေးများမှာကင်းစားသုံးမှု၏သိမ်းယူမှုကိုကင်းများ၏အကြိုးသက်ရောက်မှုမှ sensitivity ကိုအတွက်ကွဲပြားမှုအဘို့စမ်းသပ်ဖို့သုံးနိုငျ (Piazza et al ။ , 1989).
ဆားအဘို့တုံ့ပြန်မအသက်အရွယ်ကွဲပြားမှုရှိကြ၏ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အမူအကျင့်ကွဲပြားခြားနားမှုကိုကင်းမှသတ်သတ်မှတ်မှတ်ရှိကြ၏။ အလားတူပင်ကွဲပြားခြားနားမှု Self-အုပ်ချုပ်ရေးဆည်းပူးဖို့ကြွက်များအတွက်တံခါးခုံအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဖြစ်ရသောကင်း (ပြုတ်ရည်နှုန်း 75 μg / ကီလိုဂရမ်) ၏အလွန်နိမ့်ထိုးမှာမြင်ကြမခံခဲ့ရပါ။ မြင့်မားထိုး (ပြုတ်ရည်နှုန်း 1200 μg / ကီလိုဂရမ်) မှာဆယ်ကျော်သက်များနှင့်လူကြီးများကိုကင်းစားသုံးမှုအတွက်ကွာခြားခဲ့ပါဘူး။ မူးယစ်ဆေးဝါးများမှ sensitivity ကိုအတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုထိုကဲ့သို့သောမြင့်သောဆေးများ (အနည်းဆုံးလေ့လာတွေ့ရှိကြသည်မဟုတ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကမျှော်လင့်ထားခဲ့ပါတယ်Piazza et al ။ , 2000) ။ ဤသည်တွေ့ရှိချက် (လည်းမြင့်မားတဲ့ကိုကင်းဆေးများ အသုံးပြု. လူကြီးများနှိုင်းယှဉ်မြီးကောင်ပေါက်အတွက် သာ. ကြီးမြတ်စားသုံးမှုမပြခဲ့ဘူးကြောင်းလေ့လာမှုများနှင့်အတူတသမတ်တည်းဖြစ်တယ်Kantak et al ။ , 2007; Kerstetter နှင့် Kantak, 2007).
လူသားမြားသညျတှငျ, အပျိုဖော်ဝင်၏စတင်ခြင်း (ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုစတင်ခြင်းနှင့်အတူတိုက်ဆိုင်မှအကြံပြုတာဖြစ်ပါတယ်Patton et al ။ , 2004) ။ ဤတွင်ကျနော်တို့ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးအတွက်မြင့်မဟုတ်မတိုင်မီသာအပျိုဖော်ဝင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်ခဲ့သောအတွက်ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုကြွက်များတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဤသည်ကိုကင်းစွဲတစ်ခုအားနည်းချက် "ပြတင်းပေါက်" အဖြစ် postpubertal မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကိုမီးမောင်းထိုးပြ။ ဤ (အငယ်ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုကြွက်ကိုအသုံးပြုပြီးအချို့လေ့လာမှုများမြီးကောင်ပေါက်နှင့်လူကြီးများအကြားစားသုံးမှုကွဲပြားခြားနားမှုမတှေ့ရှင်းပြကူညီစေခြင်းငှါLeslie et al ။ , 2004; Belluzzi et al ။ , 2005; Frantz et al ။ , 2007; Kantak et al ။ , 2007; Kerstetter နှင့် Kantak, 2007; Harvey et al ။ , 2009; လီများနှင့် Frantz, 2009) ။ စမ်းသပ်ဆဲထိန်းသိမ်းရေးအတွက်ထပ်တူထပ်မျှလည်းအခြားအကှာဟသို့ဆခွဲကိန်းနိုင်ဘူး။ ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကိုကင်းစားသုံးမှုမကွဲပြားမှုတွေ့သောဥပမာနှစ်ခုလေ့လာမှုများ (Leslie et al ။ , 2004; Belluzzi et al ။ , 2005) အစားအလငျး / မှောင်မိုက်သံသရာ၏တက်ကြွသော, အဆင့်ထက်, မလှုပ်မရှားနေစဉ်အတွင်းဖျော်ဖြေခဲ့ကြသည်။ ထို့အပြင်ယခုတင်ပြသောလေ့လာမှုများအတွက်ကြွက် singly သျောခဲ့ကြသည်အစားအုပ်စုတခုသျော။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ခိုင်မာတဲ့လူမှုရေး interaction ကနှင့်ကစားအပြုအမူအားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျနော်တို့ (အုပ်စုကိုအိမ်သူအိမ်သားဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုကြွက်ဖို့ရွေးချယ်လှံတော်နှင့်ဘရိတ်, 1983; Vanderschuren et al ။ , 1997; ဒေါက်ဂလပ် et al ။ , 2004) ။ နောက်ထပ်အရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ချက်စမ်းသပ်ရလဒ်များ (သြဇာလွှမ်းမိုးရာအသက်, နို့နိုင်Wiley နှင့်အီဗန်, 2009) ။ စီးပွားဖြစ်ရောင်းချသူတဆင့်ဝယ်ယူကြွက် P17 မှ P24 မှ P19 (Harlan) သို့မဟုတ် P23 ထံမှမည်သည့်အချိန် (ချားလ်စ်မြစ်) မှာနို့နေကြသည်။ ကျနော်တို့နို့ဖြတ်အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲနို့ကနေမလိုလားအပ်တဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုများကာကွယ်တားဆီးဖို့အတိအကျ P21 အပေါ်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်ကြောင်းတောင်းဆိုခဲ့သည်။
ကိုကင်းစားသုံးမှု postpubertal မြီးကောင်ပေါက်အတွက်မဟုတ်ဘဲအရွယ်ရောက်ပြီးသူများတွင်ဆိုးရွားလာခဲ့သည်။ စွဲထဲမှာစက်လှေကားမော်ဒယ်များတစ်ဖြစ်ရပ်ဆန်းတဲ့အခါမှာမှန်မှန်ကနေအလွန်အကျွံသုံးစွဲခြင်းမှမူးယစ်ဆေးစားသုံးမှုအသွင်ကူးပြောင်းမှု (Ahmed က, 2011) ။ အပြုအမူ၏ဤအမျိုးအစားကို (Diagnostic နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ Disorders ၏စာရင်းအင်းလက်စွဲ, Edition ကို IV သည်နှင့်အညီမူးယစ်ဆေးဝါးမှီခိုများအတွက်အမှတ်အသားဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်စိတ်ရောဂါအစည်းအရုံး 2000) ။ ထို့ကွောငျ့အလူကြီးများထက်မြီးကောင်ပေါက်အတွက် သာ. ကြီးမြတ်တင်းမာမှု သာ. ကြီးမြတ်စွဲတာဝန်ယူမှုတစ်ခုထပ်တိုးညွှန်ပြချက်ဖြစ်ပါသည်။ ဤတသမတ်တည်းတစ်ဦးမကြာသေးခင်ကလေ့လာမှု (ဆယ်ကျော်သက်ပေမယ့်မဟုတ်အရွယ်ရောက်, ကိုကင်းသို့မဟုတ်စိတ်ကြွဆေးသူတို့ရဲ့စားသုံးမှုဆိုးရွားလာခဲ့သည်ကြောင်းပြသAnker et al ။ , 2012; Zlebnik et al ။ , 2012) ။ ကျနော်တို့လူကြီးတွေမှာတင်းမာမှုကိုစောငျ့ရှောကျခဲ့ပါဘူးအဘယ်ကြောင့်အများအပြားဖြစ်နိုင်သောအကြောင်းရင်းများရှိနေပါသည်။ အများဆုံးဖွယ်ရှိအချက်ရှည်လျား (~10 ဃ) သင်တန်း (တင်းမာမှု၏နောက်ဆက်တွဲဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်လိုအပ်သောဖြစ်ပါတယ်Ahmed က et al ။ , 2000; Knackstedt နှင့် Kalivas, 2007; Ahmed က, 2011) ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ရဲ့ကန့်သတ်ကြာချိန်ပေးထားကျနော်တို့လူကြီးများအတွက်တင်းမာမှုတားဆီးခဲ့ကြပေမည်သည့်အတိုသင်တန်း (4 ဃ), ဘက်တွင်ခဲ့ကြသည်။ ထို့အပွငျတင်းမာမှု (strain နှင့် substrain မှီခိုဖြစ်ပါသည်Freeman က et al ။ , 2009; Picetti et al ။ , 2010); က Long-အီဗန် (မှာရှိတဲ့အားကောင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်Quadro နှင့် Miczek, 2009), Wistar (Ahmed ကနှင့် Koob, 1998Harlan ထံမှဝယ်ယူ), နှင့် Sprague Dawley ကြွက် (Ferrario et al ။ , 2005; Mantsch et al ။ , 2008) ဒါပေမယ့်ချားလ်စ်မြစ်မှဝယ်ယူ Sprague Dawley ကြွက်များလျော့နည်းကြံ့ခိုင်ပုံပေါ် (Knackstedt နှင့် Kalivas, 2007; Kelamangalath နှင့် Wagner, 2010), အရာကြှနျုပျတို့သညျဤလေ့လာမှုကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
စွဲလမ်း၏နောက်ထပ်အင်္ဂါရပ် (စွဲမူးယစ်ဆေးဝါးများရရှိရန်အများကြီးအချိန်နှင့်ကြိုးစားအားထုတ်မှုကိုသုံးစွဲကြောင်းအမေရိကန်စိတ်ရောဂါအစည်းအရုံး 2000) နှင့်သူတို့၏စားသုံးမှုစျေးနှုန်းတိုးမြှင့်ဖို့အာရုံမခံစားနိုင်သောကြောင်း (Bickel et al ။ , 2011) ။ ကျနော်တို့ (ကိုကင်းစျေးနှုန်းတစ်တိုးတက်သောတိုးအောက်မှာကင်းရရှိရန်ပြုပါလိမ့်မယ်အလုပ်ကြွက်များ၏ပမာဏကိုတိုင်းတာခြင်းအားဖြင့်ဒီလုပ်ပါတယ်Griffiths က et al ။ , 1978; Risner နှင့် Silcox, 1981) ။ ငါတို့သည်လည်း (စားသုံးမှုအနေနဲ့အဆဝယ်လိုအားမျဉ်းကွေးဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေတာသငျ့အားဖြင့်စျေးနှုန်းတစ် function ကိုအဖြစ်ကွဲပြားသောထုံးစံအကဲဖြတ်Bickel et al ။ , 2000; Hursh နှင့် Silberberg, 2008) ။ ကျွန်ုပ်တို့၏လေ့လာမှုများ postpubertal မြီးကောင်ပေါက်ကင်းရရှိရန်လူကြီးများထက် ပို. အလုပ်လုပ်ခဲ့ဖော်ပြသည်။ ထို့ပြင်မိမိတို့၏ကင်းစားသုံးမှု (ဆိုလိုသည်မှာ, သူတို့ရဲ့အပြုအမူကပို inelastic ခဲ့) စျေးနှုန်းတိုးမြှင့်ဖို့လျော့နည်းထိခိုက်မခံခဲ့သည်။ အတူတကွဤတွေ့ရှိချက်မြီးကောင်ပေါက်စွဲ၏အမူအကျင့်စရိုက်များပြကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။
မြီးကောင်ပေါက်အတွက်ပိုမိုစွဲတာဝန်ယူမှုကိုကျောထောက်နောက်ခံယန္တရားများဘာတွေလဲ? အဆိုပါဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက်ကို (mesolimbic dopamine စနစ်ကပြောင်းလဲမှုများအပါအဝင်ကျယ်ပြန့်စည်းရုံးရေးနှင့် functional ဖြစ်စေအပြောင်းအလဲခြင်းကိုသည်းခံAndersen က et al ။ , 1997; လှံ, 2000; Wahlstrom et al ။ , 2010) ။ ကျနော်တို့ (မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်း VTA dopamine အာရုံခံထိပ်၏ယခင်ကလှုပ်ရှားမှုပြခဲ့ကြMcCutcheon နှင့် Marinelli, 2009; McCutcheon et al ။ , 2012) ။ (Hsd vs လက်ရှိလေ့လာမှုမှာချားလ်စ်မြစ်မှ Sprague Dawley: CRL ယခင်လေ့လာမှုမှာ Harlan ထံမှ Sprague Dawley) ဤတွင်ကျနော်တို့ကြွက်များ၏တစ်ဦးကွဲပြားခြားနား substrain သုံးပြီး, ဤတွေ့ရှိချက်ပုံတူကူးယူ; ကျွန်တော်ဆယ်ကျော်သက်ကြွက်များတွင် dopamine အာရုံခံများ၏လှုပ်ရှားမှုလူကြီးများအတွက်လှုပ်ရှားမှုထက် ~24% ပိုမိုမြင့်မားကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ စွဲအားနည်းချက် high-တုံ့ပြန်၏အခြား putative မော်ဒယ်ခုနှစ်တွင် dopamine အာရုံခံဆဲလျလှုပ်ရှားမှုအတွင်းအနိမ့်-တုံ့ပြန်ကြွက်-အလားတူတိုးတိုးချဲ့ Self-အုပ်ချုပ်ရေးအပြုအမူနှင့်ဆက်စပ်ခံရဖို့ပြသခဲ့ပါသည် vs (Marinelli နှင့်အဖြူရောင်, 2000; McCutcheon et al ။ , 2009) ။ အဆိုပါ dopamine စနစ်၏ထိုသို့သောမြင့်လှုပ်ရှားမှု (မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးစားမှုမှဆယ်ကျော်သက် predispose စေခြင်းငှါDoremus-Fitzwater et al ။ , 2010) ။ ကျွန်တော်တစ်ဦး D ကိုဖြစ်စေနှင့်အတူ dopamine အာရုံခံဆဲလျလှုပ်ရှားမှုကြိုးကိုင်နေဖြင့်မူးယစ်ဆေးစားသုံးမှုနှင့် dopamine အာရုံခံဆဲလျလှုပ်ရှားမှုအကြားကြောင်းကျိုးဆက်စပ်တည်ထောင်ရန်ရှာသောအခါ2 လှုပ်ရှားမှုတိုးမြှင့်ရန်, လှုပ်ရှားမှု, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးရန်လျော့ချဖို့အဲဒီ receptor agonist ။ ဒီဆေးတွေစီမံခန့်ခွဲခြင်းအားဖြင့်ကျနော်တို့အမူအကျင့်ကွဲပြားခြားနားမှု dopamine အာရုံခံဆဲလျလှုပ်ရှားမှုအပေါ်မူတည်ကြောင်းအကြံပြု, ကိုကင်းစားသုံးမှုအတွက်အသက်အရွယ်ကွဲပြားခြားနားမှုကိုပြောင်းပြန်လုပ်လိုက်တယ်။ ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ neurophysiological နှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာတွေ့ရှိချက်များအကြားတစ်ဦးကြောင်းကျိုးဆက်စပ် link ကိုအကြံပြုနှင့်ကုထုံးပစ်မှတ်တစ်ခုဖြစ်နိုင်သောယန္တရားကိုထုတ်လေ၏။ pharmacological အေးဂျင့်များ၏စနစ်တကျဖြန့်ဝေထောငျခြောရှိနိုငျဘဲ, သို့သော်ကျနော်တို့ (dopamine အာရုံခံဆဲလျအလောင်းမှာဗဟိုပြုမူသော autoreceptor-ရွေးချယ်ထိုး, ရှေးခယျြခဲ့Pucak နှင့်တော်ကကျေးဇူး, 1991) ။ ကျနော်တို့ကို ရွေးချယ်. ဆေးထိုး dopamine အာရုံခံဆဲလျပစ်ခတ်ရန်, dopamine လွှတ်ပေးရန်နှင့်အပြုအမူ (ပြောင်းလဲမှုများထုတ်လုပ်ရန်ကျွန်တော်တို့ကိုနှင့်အခြားသူများကအသုံးပြုဆေးများနှင့်အတူနှိုင်းယှဉ်ဖြစ်ပါသည်Robertson က et al ။ , 1993; Marinelli et al ။ , 2003; ဇေဘတို့ကို et al ။ , 2009) ။ ကျနော်တို့သိသိသာသာကိုအသုံးပြု quinpirole ၏ဆေးထိုး postsynaptic D ကို activated ကြောင့်မဖြစ်နိုင်ဒါဟာဖြစ်ပါသည်2receptors -class ဤ receptors တိုး၏ activation ထက်လျှောက်လျော့နည်း, မူးယစ်ဆေးစားသုံးမှု (ဘာလို့လဲဆိုတော့Howell et al ။ , 1997).
အချို့လေ့လာမှုများ (ဦးနှောက်ထဲမှာကိုကင်းအဆင့်ဆင့် intraperitoneal သို့မဟုတ်သွေးကြောသွင်းပေးပို့ပြီးနောက်မြီးကောင်ပေါက်နှင့်လူကြီးများအကြားအလားတူဖြစ်ကြောင်းအကြံပြုCaster et al ။ , 2005; Frantz et al ။ , 2007; Schramm-Sapyta et al ။ , 2011) ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်များကိုကိုကင်းနှင့်အကင်း metabolites ၏အဆင့်ဆင့်လူကြီးများထက်မြီးကောင်ပေါက်အတွက်အနည်းငယ်နိမ့်ဖြစ်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ သို့ရာတွင်ထိုသို့မြီးကောင်ပေါက်အားဖြင့် သာ. ကြီးမြတ်ကင်းစားသုံးမှုများအတွက်ကင်းအဆင့်ဆင့်သို့မဟုတ်ဇီဝြဖစ်အကောင့်ထဲမှာကွဲပြားခြားနားမှုကြောင့်မဖြစ်နိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ လူကြီးများမှဆွေမျိုး, မူးယစ်ဆေးရရှိရန်စျေးနှုန်းတိုးမြှင့်အခါမြီးကောင်ပေါက်ကိုကင်းများ၏မြင့်မားထိုးမြင့်မားစားသုံးမှုပြသပေမယ့်သူတို့တစ်တွေအနိမ့်သောစျေးနှုန်း (FR1) မှာအလားတူစားသုံးမှုရှိခဲ့ပါတယ်။ ကိုကင်းစားသုံးမှုအတွက်မဆိုဇီဝြဖစ်-related အစားထိုးတိုးနိမ့်နှင့်အမြင့်မားတဲ့နှစ်ဦးစလုံးစျေးနှုန်းများမှာတှေ့မွငျရပွီလိမ့်မယ်။
သိမြင်မှုနှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာအစီအမံများအတွက်ရင့်ကျက်အပြောင်းအလဲများကိုလည်းကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးအတွက်အသက်အရွယ်-related ကွဲပြားခြားနားမှုတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်လိမ့်မည်။ မြီးကောင်ပေါက် ( "စွန့်စားမှု-takers" စဉ်းစားနှင့်လူကြီးများထက်ပိုမိုမြင့်မားများအတွက်ဦးစားပေးများနှင့်ဝတ္ထုပတ်ဝန်းကျင်မှာ၏ရှာဖွေရေးကိုပြသထားပါသည်ဒေါက်ဂလပ် et al ။ , 2003; Stansfield နှင့် Kirstein, 2006) ။ ဒါဟာ ((မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်မှာတိုးပွါးသော) အန္တရာယ်-ယူပြီးမြီးကောင်ပေါက်အတွက်ရှာကြံအသစ်အဆန်းများနှင့်အာရုံခံစားမှုအကြားတစ်ဦးမတိုက်ဆိုင်ထံမှအဓိကအားထားကြောင်းအကြံပြုနှင့် (လူကြီးအပေါ်ရင့်ကျက်သော) Self-စည်းမျဉ်းထားပြီးSteinberg, 2004) ။ အလားတူပင်ယုံကြည်သက်သေအထောက်အထား (တိရိစ္ဆာန်များရင့်ကျက်အဖြစ် inhibitory ထိန်းချုပ်မှုသနျ့စလျှော့အန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေအမူအကျင့်ကိုရှင်းပြစေခြင်းငှါအကြံပြုRidderinkhof နှင့်ဗန် der Molen, 1997; Geier et al ။ , 2010) နှင့် သာ. ကြီးမြတ်အပြုအမူတားစီး (Sturman et al ။ , 2010; Andrzejewski et al ။ , 2011) မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းထက်လူကြီးကာလအတွင်း။ ကျနော်တို့ကဒီမှာကဤစရိုက်များကိုစမ်းသပ်မပြုခဲ့ပေမယ့်အဲဒီအချက်တွေမြီးကောင်ပေါက်အတွက်မြင့်မားသောစွဲလမ်းအန္တရာယ်မှအထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
အတူတကွကျွန်တော်တို့ရဲ့တွေ့ရှိချက် postpubertal မြီးကောင်ပေါက်ကိုကင်းများ၏စွဲလမ်းဂုဏ်သတ္တိများမှလူကြီးများထက်ပိုဖြစ်ပေါ်နိုင်ဖြစ်ကြောင်းပြသပါ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်၌ဤမြင့်စွဲတာဝန်ယူမှု VTA dopamine အာရုံခံ၏မြင့်လှုပ်ရှားမှုနဲ့ဆက်စပ်နေပါတယ်နှင့်ဤအာရုံခံ၏လုပ်ဆောင်မှုကိုဖိနှိပ်တဲ့မူးယစ်ဆေးများကပြောင်းပြန်နိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့တွေ့ရှိချက်စွဲစွန့်စားမှုတစ်ခု key ကိုဒြပ်စင်အဖြစ် dopamine အာရုံခံမီးမောင်းထိုးပြခြင်းဖြင့်ဆယ်ကျော်သက်စွဲတာဝန်ယူမှု၏အာရုံကြောယန္တရားများသို့ထိုးထွင်းသိမြင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏တွေ့ရှိချက်လည်းကင်းစွဲမှမြင့်လွယ်ကူစွာထိခိုက်ဆယ်ကျော်သက် neurobiology ၏ထုတ်ကုန်သည်နှင့်ပြင်ပလူမှုရေးနှင့်စီးပွားရေးလွှမ်းမိုးမှုမရှိခြင်းအတွက်သရုပ်ပြနိုင်ဖော်ပြသည်။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စွဲလမ်းအပြုအမူတို့အားဤသို့သောခိုင်မာတဲ့လွယ်ကူစွာထိခိုက်ပေးအပ်သောကွောငျ့ထိုကွောငျ့, မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းဇီဝစွန့်စားမှုအချက်များပစ်မှတ်ထားကြောင်းကုထုံးမဟာဗျူဟာများမြင့်မားကိုဦးစားပေးထားရပါမည်။
မတ်လ 8, 2012 ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။
တည်းဖြတ်မူဒီဇင်ဘာလ 28, 2012 ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။
လက်ခံဇန်နဝါရီလ 26, 2013 ။
ဤလုပ်ငန်းကနျြးမာရေး Grant က R01DA020654 အမျိုးသား Institutes ကထောက်ခံခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ကဒီလက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်အပေါ်အထောက်အကူဖြစ်စေမှတ်ချက်များများအတွက် Mitch Beales နှင့် Lorissa Lamoureux နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအကူအညီများအဘို့, တင်းမာမှုလျှော့ချလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအပေါ်အထောက်အကူဖြစ်စေ input ကိုဒေါက်တာက Serge Ahmed က, ဒေါက်တာရောဘတ်ရှုပ်ထွေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုစာချုပ် N01DA-9-7767 အပေါ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အင်စတီကျု၏ပံ့ပိုးမှုနှင့်အတူ, ဦးနှောက်ကိုကင်းအဆင့်ဆင့်ကိုခွဲခြားစိတ်ဖြာဘို့ Utah တက္ကသိုလ်မှာလူ့ဝိသဗေဒများအတွက် Center မှာဒေါက်တာ Dave Moody နှင့်ပုဂ္ဂိုလ်များကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ (အပြုအမူအရင်းအမြစ်များများအတွက် Institutes ဒေါက်တာ Pete ရိုးမားကျေးဇူးတင်ပါတယ်www.ibrinc.org) ဝယ်လိုအား၏အဆမော်ဒယ်သုံးပြီး data ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအပေါ်သူ၏အကြံဉာဏ်။
စာပေးစာယူ Michela Marinelli, ဆယ်လူလာနှင့်မော်လီကျူးဆေးဝါးဗေဒဌာန, ဆေးပညာ Rosalind Franklin ဟာတက္ကသိုလ်နှင့်သိပ္ပံ, အဆိုပါချီကာဂိုဆေးဘက်ဆိုင်ရာကျောင်း, 3333 အစိမ်းရောင်ဂလားပင်လယ်အော်လမ်း, မြောက်ဥက္ကလာပချီကာဂို, IL 60064 မှကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းသင့်ပါတယ်။ [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]
မူပိုင်ခွင့်© 2013 စာရေးသူ 0270-6474 / 13 / 334913-10 $ 15.00 / 0
Ahmed က S နဲ့
(2011) မူးယစ်ဆေးစွဲ၏တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များအတွက် Neuromethods, မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု၏စက်လှေကား, Olmstead M (Humana, နယူးယောက်) ed ။
(2000) Diagnostic နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါ၏စာရင်းအင်းလက်စွဲ (American Psychiatric Association, ဝါရှင်တန်ဒီစီ) စာသားတည်းဖြတ်မူ Edition ကို, Ed က4။
Andersen က SL,
Rutstein M က,
dopamine အဲဒီ receptor overproduction နှင့်ဖျက်သိမ်းရေးအတွက် (1997) လိင်ကွဲပြားမှု။ Neuroreport 8: 1495-1498 ။
Harris က R ကို,
(2011) အော်ပရေတာသင်ယူမှု, မျိုးသုဉ်းနှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာတားစီး Paradigm အတွက်အရွယ်ရောက်ပြီးသူနှင့်ဆယ်ကျော်သက်ကြွက်အပြုအမူ၏တစ်ဦးကနှိုင်းယှဉ်။ ပြုမူနေ neuroscience 125: 93-105 ။
ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်များတွင်မူးယစ်ဆေးဝါး, တွေကိုနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုများကသွေးဆောင်ရှာကြံကင်း၏ (2010) Reinstatement ။ Psychopharmacology (Berl) 208: 211-222 ။
ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်များတွင်စိတ်ကြွဆေး Self-အုပ်ချုပ်ရေး (2012) စက်လှေကား။ မူးယစ်ဆေးအရက်ပြုမှ 124: 149-153 ။
(1995) အစောပိုင်း-စတင်ခြင်းမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနှင့်နောက်ပိုင်းတွင်မူးယစ်ဆေးဝါးပြဿနာများ၏အန္တရာယ်။ မူးယစ်ဆေးအရက်ပြုမှ 40: 9-15 ။
ဝမ် R ကို,
Leslie FM ရေ
(2005) Acetaldehyde ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုကြွက်များတွင်နီကိုတင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးဝယ်ယူပိုကောင်းစေပါတယ်။ Neuropsychopharmacology 30: 705-712 ။
Marsch LA က,
(2000) ဆွေမျိုးအားဖြည့်ထိရောက်မှု Deconstructing နှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာဘောဂဗေဒနှင့်အတူ pharmacological အားဖြည့်များ၏အစီအမံ situating: တစ်သီအိုရီအဆိုပြုချက်ကို။ Psychopharmacology (Berl) 153: 44-56 ။
(2011) စစ်ကူရောဂါဗေဒ၏အမူအကျင့်ဘောဂဗေဒနှင့် neuroeconomics: စွဲ၏ etiology နှင့်ကုသမှုများအတွက်ဂယက်ရိုက်။ Curr စိတ်ရောဂါကုသမှုကိုယ်စားလှယ် 13: 406-415 ။
Walters က JR,
Roth RH အ,
(1973) Dopaminergic အာရုံခံ: တစ်ခုတည်းဆဲလ်လှုပ်ရှားမှုအပေါ် antipsychotic မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်စိတ်ကြွဆေး၏အကျိုးသက်ရောက်။ J ကို Pharmacol Exp Ther 185: 560-571 ။
Dallery J ကို
ကြွက်များတွင်အစားအစာ၏မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောတန်ဖိုးကိုအပေါ်စီးပွားရေးကိုအမျိုးအစားနှင့်နီကိုတင်း၏ (2012) အကျိုးသက်ရောက်မှု။ J ကို Exp စအိုပြုမူနေ 97: 183-202 ။
(2005) ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုကြွက်များတွင်ထပ်ခါတလဲလဲ-ထိုးကင်းရန်အမူအကျင့်တုံ့ပြန်မှု Enhanced ။ Psychopharmacology (Berl) 183: 218-225 ။
မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်များတွင်လှုံ့ဆော်မှုများ (2003) Developmental neurocircuitry: စွဲအားနည်းချက်၏အရေးပါသောကာလ။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု 160: 1041-1052 ။
Chen က CY,
မူးယစ်ဆေးမှီခိုပြဿနာများအတွက် (2009) အစောပိုင်း-စတင်ခြင်းမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုများနှင့်စွန့်စားမှု။ စှဲလမျးသူပြုမူနေ 34: 319-322 ။
Rajendran P ကို,
လှံကို LP သို့
အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်မှဆယ်ကျော်သက်ဆွေမျိုးအတွက်မြင့်မားသောအီသနောစားသုံးမှုလွှမ်းမိုး (2005) အချက်များ။ အရက် Clin Exp Res 29: 1796-1808 ။
မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်၌ (2010) လှုံ့ဆျောမှုစနစ်များ: ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုများတွင်အသက်အရွယ်ကွဲပြားခြားနားမှုဘို့ဖြစ်နိုင်တဲ့သက်ရောက်မှုများနှင့်အခြားအန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေအပြုအမူတွေ။ ဦးနှောက် Cogn 72: 114-123 ။
ဒေါက်ဂလပ် LA က,
ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူသည်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုကြွက်များတွင် (2003) Novell-အရာဝတ္ထုရာအရပျအေးစက်: လူမှုရေးအထီးကျန်ဆိုးကျိုးများ။ Physiol ပြုမူနေ 80: 317-325 ။
ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူသည်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုကြွက်များတွင်လူမှုရေး interaction က၏ (2004) အကျိုးဖြစ်ထွန်းသောဂုဏ်သတ္တိများ: ဘာသာရပ်များနှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၏အိုင်ဆိုလိတ်အိုးအိမ်သာရှိပြီးပြည်ပမှလူမှုရေး၏သက်ရောက်မှု။ dev Psychobiol 45: 153-162 ။
(2005) ဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသောနှင့်ထိန်းချုပ်ကနေဆိုးရွားလာခဲ့သည်ကိုကင်းသုံးစွဲမှုအကူးအပြောင်းနဲ့ဆက်စပ်အပြုအမူ plasticity ။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု 58: 751-759 ။
(2007) အပြုအမူနှင့် periadolescent နှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်များတွင်ကင်းဖို့ neurochemical တုံ့ပြန်မှု။ Neuropsychopharmacology 32: 625-637 ။
Freeman က KB,
(2009) ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးမှအချိန်ကြာမြင့်စွာသုံးစွဲနိုင်ကာလအတွင်းမူးယစ်ဆေးဝါး-စားသုံးမှု၏ပုံစံများအတွက်ကွဲပြားခြားနားမှု strain ။ ပြုမူနေ neuroscience 123: 156-164 ။
Terwilliger R ကို,
Teslovich T က,
Velanova K သည်,
Luna B ကို
(2010) ဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့အတွက်နုနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက် inhibitory ထိန်းချုပ်မှုအပေါ်သြဇာလွှမ်းမိုးမှု။ Cereb Cortex 20: 1613-1629 ။
(1983) Intracellular နှင့် nigral dopaminergic အာရုံခံ၏ extracellular electrophysiology ။ 1 ။ သတ်မှတ်ချက်နှင့်စရိုက်လက္ခဏာတွေ။ neuroscience 10: 301-315 ။
nigral dopamine အာရုံခံအတွက်ပုံစံပစ်ခတ်၏ (1984) ကထိန်းချုပ်: တစ်ခုတည်းဆူးပစ်ခတ်ရန်။ J ကို neuroscience 4: 2866-2876 ။
Griffiths က RR,
မူးယစ်ဆေးတာဟာအားဖြင့်ထိန်းသိမ်းထား (1978) တိုးတက်ရေးပါတီ-အချိုးစွမ်းဆောင်ရည်: ကိုကင်းများ၏နှိုင်းယှဉ်, diethylpropion, chlorphentermine နှင့် fenfluramine ။ Psychopharmacology (Berl) 56: 5-13 ။
Rajagopalan K သည်,
(2009) ဆယ်ကျော်သက်အတွက်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရကိုကင်းများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူအထီးကြွက် orbitofrontal Cortex-related neurocognitive လုပ်ငန်းဆောင်တာပေါ်မှာ။ Psychopharmacology (Berl) 206: 61-71 ။
Byrd တို့ပါပဲ ld
အဆိုပါရှဉ့မျောက်အတွက်အပြုအမူအပေါ် serotonin နဲ့ dopamine အကြား (1997) Pharmacological interaction က။ Psychopharmacology (Berl) 131: 40-48 ။
မူးယစ်ဆေး Self-အုပ်ချုပ်ရေး (1993) အပြုအမူဘောဂဗေဒ: တစ်ခုမိတ်ဆက်စကား။ မူးယစ်ဆေးအရက်ပြုမှ 33: 165-172 ။
(2013) အပြုအမူဘောဂဗေဒနှင့် emperical အများပြည်သူမူဝါဒက။ J ကို Exp စအိုပြုမူနေ 99: 98-124 ။
(2008) စီးပွားရေးဇုန်ဝယ်လိုအားနှင့်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောတန်ဖိုး။ Psychol ဗြာ 115: 186-198 ။
O'Malley pm တွင်,
သော့ချက်တွေ့ရှိချက်များခြုံငုံသုံးသပ်ချက်, 2011 (လူမှုရေးသုတေသနအင်စတီကျု, မစ်ရှီဂန်တက္ကသိုလ်, အမ်း Arbore, MI): (2010) ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုအပေါ်အနာဂတ်အမျိုးသားရေးရလဒ်များကိုစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း။
ယာမာဂူချီ K သည်,
ချန် K သည်
အဆိုပါဂိတ်ဝေးသီအိုရီအဘို့နောက်ထပ်သက်သေအထောက်အထား: မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကနေလူကြီးမှမူးယစ်ဆေးပါဝင်ပတ်သက်မှုအတွက်တိုးတက်မှု၏ (1992) စင်မြင့်။ J ကိုလုံးအရက် 53: 447-457 ။
Uribe V ကို
ကြွက်များတွင်ကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးအပေါ်လိင်, estrous သံသရာနှင့်မူးယစ်ဆေး-စတင်ခြင်းအသက် (2007) သြဇာလွှမ်းမိုးမှု (Rattus norvegicus) Exp Clin Psychopharmacol 15: 37-47 ။
Kelamangalath L ကို,
(2010) D-serine ကုသမှုကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးမှတိုးချဲ့ဝင်ရောက်ခွင့်ကိုအောက်ပါကြွက်များတွင်ကင်း-ရစေတယ် reinstatement လျော့နည်းစေသည်။ neuroscience 169: 1127-1135 ။
(2007) နှိုးဆွ-ဆုလာဘ်သင်ယူမှုအပေါ်ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်များတွင်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရကိုကင်းများ၏သက်ရောက်မှု Differential ။ Psychopharmacology (Berl) 194: 403-411 ။
Knackstedt LA က,
ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးမှ (2007) တိုးချဲ့ access ကိုမူးယစ်ဆေး-ရစေတယ် reinstatement ပေမယ့်အမူအကျင့်ကိုမာင်းပိုကောင်းစေပါတယ်။ J ကို Pharmacol Exp Ther 322: 1103-1109 ။
Nikula H ကို,
တစ်ဦး gonadotrophin-releasing ဟော်မုန်းရန်နှင့်အတူ postnatally ကုသအထီးကြွက်၏ (1988) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရငျ့။ J ကို Endocrinol 116: 241-246 ။
Leslie FM ရေ,
Lotfipour S က,
forebrain လှုံ့ဆော်တုန့်ပြန်၏ (2004) ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ဖှံ့ဖွိုးတိုး: တိရိစ္ဆာန်လေ့လာမှုများအနေဖြင့်ထိုးထွင်းသိမြင်။ အမ်းနယူးယော့ Acad သိပ္ပံ 1021: 148-159 ။
Slotkin က TA
အထီးကြွက်များတွင်အရွယ်ရောက်ပြီးသူ-စတင်ခြင်းနီကိုတင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေး vs. ဆယ်ကျော်သက်အရွယ် (2007): အကျိုးသက်ရောက်၏ကြာချိန်နှင့်နီကိုတင်းအဲဒီ receptor ဆက်စပ်မှု differential ။ Neurotoxicol Teratol 29: 458-465 ။
periadolescence စဉ်အတွင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကိုကင်းဖို့လေ့ကျင့်သင်ကြားအထီးကြွက်များတွင်ရှာကြံကင်း၏ (2009) attenuation ပေါက်ဖွား။ Psychopharmacology (Berl) 204: 725-733 ။
Bigelow GE က,
(2001) လူ့ပလာစမာထဲမှာကိုကင်းနှင့်အ benzoylecgonine ၏ quantitative များအတွက်တစ်ဦးကအတည်ပြုအရည် Chromatography-လေထုဖိအားဓာတုသည် .ionizer-တွဲဖက်အစုလိုက်အပြုံလိုက် spectrometry နည်းလမ်း။ J ကိုစအို Toxicol 25: 497-503 ။
(2003) ထောက်လှမ်းခြင်းနှင့်အရည် Chromatography / တွဲဖက်အစုလိုက်အပြုံလိုက် spectrometry အားဖြင့်ကိုကင်း N-အောက်ဆိုဒ်နှင့်လူ့သွေးရည်ကြည်ထဲမှာတခြားကင်း metabolites အချိန်သင်တန်း။ စအို Chem 75: 4335-4340 ။
မူးယစ်ဆေးစားသုံးမှု၏ (2001) စည်းမျဉ်းဥပဒေ။ Exp Clin Psychopharmacol 9: 131-143 ။
Yuferov V ကို,
က Mathieu-Kia လေး,
ကြွက်များတွင်ကင်း-သွေးဆောင် reinstatement နှင့်ဦးနှောက် mRNA အဆင့် Self-အုပ်ချုပ်ရေးအပေါ်အနိမ့်ကိုကင်းဆေးများနှိုင်းယှဉ်မြင့်မားဖို့တိုးချဲ့သုံးစွဲနိုင်၏ (2004) အကျိုးသက်ရောက်မှု။ Psychopharmacology (Berl) 175: 26-36 ။
Francis က DM,
(2008) Stressor- နှင့် corticotropin အချက်-သွေးဆောင် reinstatement နှင့်တက်ကြွသောစိတ်ဖိစီးမှု-related အပြုအမူတုံ့ပြန်မှုလွှတ်ကြွက်များအားဖြင့်ရှည်လျား-access ကိုကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးအောက်ပါလုပ်ခဲ့ပြီးနေကြသည်။ Psychopharmacology (Berl) 195: 591-603 ။
White က FJ
ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးမှ (2000) Enhanced အားနည်းချက် midbrain dopamine အာရုံခံ၏မြင့်မားသောချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့လှုပ်ရှားမှုနဲ့ဆက်စပ်နေပါတယ်။ J ကို neuroscience 20: 8876-8885 ။
Cooper က, DC,
midbrain dopamine အာရုံခံ၏ (2003) Impulse လှုပ်ရှားမှုမူးယစ်ဆေး-ရှာကြံအပြုအမူ modulates ။ Psychopharmacology (Berl) 168: 84-98 ။
dopamine အာရုံခံ၏ (2006) စိတ်လှုပ်ရှား: မော်ဂျူနှင့်ဇီဝကမ္မအကျိုးဆက်များ။ CNS Neurol disorders မူးယစ်ဆေးပစ်မှတ် 5: 79-97 ။
(2009) ခေတ်ကိစ္စရပ်များ။ EUR J ကို neuroscience 29: 997-1014 ။
ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးအောက်ပါ dopamine ဆဲလ် neuroadaptations အတွက် (2009) တစ်ဦးချင်းခြားနားချက်။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု 66: 801-803 ။
Carr က SB,
Ford ကား Ka,
အဆိုပါ ventral tegmental ဧရိယာမီးအတွက် (2012) Dopamine အာရုံခံပိုမြန်ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုကြွက်များတွင်လူကြီးများထက်။ J ကို Neurophysiol 108: 1620-1630 ။
Mitchell က JM,
(2005) Locomotor လှုပ်ရှားမှု Self-အုပ်ချုပ်ရေးအပြုအမူများဝယ်ယူသော်လည်းမကင်းစားသုံးမှုခန့်မှန်းထားပါတယ်။ ပြုမူနေ neuroscience 119: 464-472 ။
Hemphill လုပ် SA,
Donath S က,
(2004) အပျိုဖော်ဝင်ခြင်းနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုခြင်းနှင့်အလွဲသုံးစားမှုစတင်ခြင်း။ ကလေးအထူးကု 114: e300-e306 ။
စိတ်ကြွဆေး Self-အုပ်ချုပ်မှုမှတစ်ဦးချင်းစီအားနည်းချက်ကြိုတင်ခန့်မှန်းကြောင်း (1989) အချက်များ။ သိပ္ပံ 245: 1511-1513 ။
Deroche-ဂမုန်း V ကို,
(2000) ဒေါင်လိုက်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုစွဲဖို့ predisposed တစ်ဦးမူးယစ်ဆေးဝါး-အားနည်းချက် phenotype ကြိုတင်ခန့်မှန်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးထိုး-တုံ့ပြန်မှုအတွက်ပြောင်းရွှေ့ရသည်။ J ကို neuroscience 20: 4226-4232 ။
Picetti R ကို,
(2010) Fischer နှင့် Lewis ကကြွက်များတွင်တိုးချဲ့-access ကိုကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးအတွက် preference ကိုနှင့်ထိုးတင်းမာမှုထိုး။ Psychopharmacology (Berl) 211: 313-323 ။
(1991) တစိတ်တပိုင်း dopamine လျော့ကျ apomorphine ဖို့ကျန်နေတဲ့ dopamine အာရုံခံတစ်ခုတိုးမြှင် sensitivity ကိုဖြစ်ပေါ်။ synapses 9: 144-155 ။
Quadro ထားတဲ့ IM,
(2009) ပြင်းထန်သောကင်း Bing ၏နှစ်ဦးသည် Modes: လူမှုရေးရှုံးနိမ့်စိတ်ဖိစီးမှုပြီးနောက်ဇွဲတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်ကြောင့်ကြွက်များတွင်တိုးချဲ့ဝင်ရောက်ခွင့်အခြေအနေများစားသုံးမှု၏နှုန်းမှာတိုးတက်လာခဲ့သည်။ Psychopharmacology (Berl) 206: 109-120 ။
(2006) တစ်ဦးကိုကင်းမှီခို syndrome ရောဂါကင်းအသုံးပြုမှုစတင်ခြင်းပြီးနောက်မကြာမီပေါ်ထွက်လာသောစိတ်ကူးကိုထောကျပံ့ဖို့ရှိပါတယ် epidemiological သက်သေအထောက်အထားရှိပါသလား? Neuropsychopharmacology 31: 2055-2064 ။
(1997) စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသယံဇာတ, အပြောင်းအလဲနဲ့မြန်နှုန်းနှင့် inhibitory ထိန်းချုပ်မှု: တစ်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာရှုထောင့်။ Biol Psychol 45: 241-261 ။
, ME Risner
တစ်တိုးတက်သော-အချိုးပါရာဒိုင်းအတွက် Beagle ခွေးအားဖြင့် (1981) Psychostimulant Self-အုပ်ချုပ်မှု။ Psychopharmacology (Berl) 75: 25-30 ။
Robertson က GS,
Wilson ကနေ C,
(1993) striatal dopamine နဲ့ acetylcholine လွှတ်ပေးရေးအပေါ် quinpirole ၏ဆိုးကျိုးများနှင့် putative presynaptic dopaminergic agonists B-HT 920 နှင့် SND 919 ၏ Vivo နှိုင်းယှဉ်ပါ။ J ကို Pharmacol Exp Ther 264: 1344-1351 ။
(2009) လူကြီးများထက်မူးယစ်ဆေးစွဲဖို့ပိုအားနည်းချက်မြီးကောင်ပေါက်ရှိပါသလား တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များမှသည်သက်သေအထောက်အထား။ Psychopharmacology (Berl) 206: 1-21 ။
Glowacz S က,
ကြွက်များတွင်မိမိဆန္ဒအလျောက်ကိုကင်းစားသုံးမှုအတွက်တစ်ဦးချင်းစီနှင့်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာခြားနားချက်များ (2011) အခန်းက္ပ။ Psychopharmacology (Berl) 215: 493-504 ။
Shahbazi M က,
Williams က BF,
(2008) Age- နှင့်ကြွက်များတွင်လိင်-မှီခိုစိတ်ကြွဆေး Self-အုပ်ချုပ်မှု။ Psychopharmacology (Berl) 196: 71-81 ။
Siegmund S က,
Vengeliene V ကို,
ဆင်းရဲချို့တဲ့ခြင်းနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုအဆင့်တွေနဲ့ရေရှည်အီသနော Self-အုပ်ချုပ်ရေးအပေါ်စတင်ခြင်းသောက်သုံးမှာအသက် (2005) သြဇာလွှမ်းမိုးမှု။ အရက် Clin Exp Res 29: 1139-1145 ။
(2000) ကဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုဦးနှောက်နှင့်အသက်အရွယ်-related အပြုအမူသရုပ်။ neuroscience Biobehav ဗြာ 24: 417-463 ။
(1983) Periadolescence: အသက်အရွယ်-မှီခိုအပြုအမူများနှင့်ကြွက်များအတွက် psychopharmacological Response ။ dev Psychobiol 16: 83-109 ။
အဆိုပါဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်များတွင်အပြုအမူအပေါ်အသစ်အဆန်းများ (2006) အကျိုးသက်ရောက်မှု။ dev Psychobiol 48: 10-15 ။
Steinberg L ကို
မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်များတွင်တာ (2004) အန္တရာယ်: အဘယျသို့အပြောင်းအလဲ, ဘာကွောငျ့လဲ? အမ်းနယူးယော့ Acad သိပ္ပံ 1021: 51-58 ။
(2010) ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းဆာပသင်ယူမှုနှင့်မျိုးသုဉ်းနေစဉ်အတွင်းလူကြီးများအနေဖြင့်အပြုအမူကွဲပြားခြားနားမှုပြ။ ပြုမူနေ neuroscience 124: 16-25 ။
Bolan M က,
ကိုကင်း၏ (2009) လက်ခံ. ပေးပို့ဆန္ဒရှိသည်နှင့်ကြွက်များတွင်မူးယစ်ဆေးများအတွက်လှုံ့ဆျောမှုဆန့်ကျင်ကာကွယ်ပေးသည်။ ပြုမူနေ neuroscience 123: 913-925 ။
(၂၀၁၂) သင်လား၊ ဇီဝကမ္မဆိုင်ရာ dopamine အာရုံခံများနှင့်ဆက်စပ်သောစိန်ခေါ်မှုများ။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း neuroscience 35: 422-430 ။
(1997) ကြွက်များတွင်လူမှုရေးကစားအပြုအမူများ၏ neurobiology ။ neuroscience Biobehav ဗြာ 21: 309-326 ။
အဖြူရောင် T က,
Luciana M က
မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက် dopamine neurotransmission အတွက် (2010) Developmental အပြောင်းအလဲများကို: အကဲဖြတ်အတွက်အမူအကျင့်သက်ရောက်မှုများနှင့်ပြဿနာများကို။ ဦးနှောက် Cogn 72: 146-159 ။
သားကိုမွေးရန်သားကိုမွေးသို့မဟုတ်မရန် (2009)? ဆယ်ကျော်သက်ကြွက်များတွင်မူးယစ်ဆေးဆိုးကျိုးများ၏ပင်ကိုယ်မူလအကဲဖြတ်။ int J ကို Dev မှ neuroscience 27: 9-20 ။
(2009) Serotonergic နှင့်လောင်းကစားအမူအကျင့်များ dopaminergic မော်ဂျူတဲ့ဝတ္ထုကြွက်လောင်းကစားလုပ်ငန်းတာဝန်သုံးပြီးအကဲဖြတ်အဖြစ်။ Neuropsychopharmacology 34: 2329-2343 ။
(2012) လေ့ကျင့်ခန်းဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်များတွင်ကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေး၏တင်းမာမှုကိုလျော့ချရန်။ Psychopharmacology (Berl) 224: 387-400 ။